SKIDS: အများဆုံးမထီမဲ့မြင်ပြု Autobot subtitles October 29, 2020
SKIDS: အများဆုံးမထီမဲ့မြင်ပြု Autobot subtitles
အချင်းအသင်း၊ Er, ငါတို့ကြီးမားတဲ့ 'un' ကိုပြုရမည်လော ငါကတက်သည်တက်! ငါပုံစံခံစားရတယ် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်နေသောအာရုံကိုအငတ်ခံနေသော Autobot အားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်၏လက်ကိုယူပါ အထိန်းအကွပ်မဲ့သူ၊ ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသူ၊ ထုတ်ပယ်ခံရသူများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမလေးမစားပြုမူခြင်း၊ ဟုတ်ကဲ့သူငယ်ချင်းများ၊ ဤအရာသည်နှစ်ရှည်ခံ Autobot ၏အတွေးအမြင် Skids များ၊ ကစားသမားသစ်များနှင့်အခန်းကဏ္ new သစ်များအတွက်မကြာခဏလက်ဝယ်ရောက်ရှိနေသောသူ ဤသည်ညံ့ဖျင်း sod က၎င်း၏အစောဆုံးကာလကတည်းက Transformer နှင့်အတူရှိခဲ့သော်လည်းမဆုတ်မနစ်သတိမမူဖြစ်ပါတယ် - ဒါပေမယ့်ဒီအိမ်တော်၌မ! Thew စတိုင်လ်သည်ယနေ့အတွက် Skids သည်သူ၏အကြောင်းပြချက်ကိုရရှိသည်။ ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ စကြဝ,ာမှာရှိတဲ့ Skidward ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ဒီနေရာဟာဂန္တ ၀ င်မီဒီယာတွေမှာအရမ်းနာကျင်နေတယ် သူသည်နောက်ဆုံးတွင်အသက်သုံးဆယ်ရှိသူ၏အရှိန်အဟုန်ကိုထိမှန်သည်အထိသူ၏ရှိနေခြင်းတစ်ခုလုံးသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။ အတူတူပါပဲ ဆိုလိုတာကသူ G1 မှာဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလား။ လိုပဲသူဟာဖန်သားပြင်မှာပေါ်လာခဲ့ပေမယ့်သူကတော်တော်များများကကြည့်ရှုသူပဲ သူတစ်ချိန်ကသူပြေးထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနောက်သူတို့သည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောစက်ရုပ်တစ်မျိုးမျိုးတွင်သူ၏သက်မဲ့ခွံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါ့သူရဲကောင်း ပုံနှိပ်နေစဉ်သူသည်ချိုသောဆပ်ပြာရေမြှုပ်ရေချိုးနည်းကိုရခြင်းကြောင့်လူသိအများဆုံးဖြစ်ဖွယ်ရှိသည် ဒါပေမယ့်သူမှတ်မိခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကတော့သူဟာမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ပါ။ ဒါသူပဲ ဒါကသူ့လက်မှတ်ပြောင်းရွှေ့မှုပဲ။ ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာကြီးကိုမှားယွင်းနေတာတွေလိုပဲငါဟာစီမံခန့်ခွဲမှုမှားယွင်းနေတာနဲ့အမျှခံစားရတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်း၌ Hasbro အဖွဲ့သည်ကြီးမားသောလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရန်ဇာတ်ကောင်အမြောက်အမြားရှိခြင်းနှင့် Skids များသည်အက်ကြောင်းများမှတဆင့်ရွေ့လျားနေသည့်အစဉ်အမြဲရှိနေပုံရသည်။ သူသည် ၁၉၈၄ သို့မဟုတ် ၈၅ ခုတွင်ခိုင်မာသောနေရာမရှိဘဲစင်များပေါ်သို့ '' နောက်သို့တက်ရုံမျှသာ '' ခြစ်ရာ 'ကိုသယ်ဆောင်လာသည့်ကစားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအလုပ်ခေါင်းစဉ်နဲ့အလွန်အမင်းမှိုင်းသောဇာတ်ကောင်ဇီဝနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်များကိုအသုံးပြုနေစဉ် - poopoo ကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားစေသည့်နာမည်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ 'ငါ့အတွက် G1 Skids' ဟာအကောင်းဆုံးကားဟောင်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ငါအလေးအနက် friggin ထိပ်ဆုံး ၃ 'ဒါကြောင့်ထွက်စစ်ဆေး! ဒါကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ထူးခြားတဲ့ carformer ဒီဇိုင်းကိုယူတာပါ။ ပါးပျဉ်းရင်ဘတ်, တောင်ပံတံခါးများ, အားလုံး hits - ပြီးတော့ဘယ်သူကမှဆွဲထုတ်လို့မရတဲ့ထူးခြားတဲ့ chonky square lad style နဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုလုံးလုံးလုပ်ထားတယ်။ အခြားဘယ်သူမှတကယ်ချွတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူကဂန္တ ၀ င်ငွေရောင်ငွေရောင်စတစ်ကာများနှင့်အတူအလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနက်ရှိုင်းသောသတ္တုအပြာရောင်ကိုအထူးသဖြင့်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောနည်းဖြင့်အရောင်တောက်ပနေသည်။ cheeky အနီရောင်ပလပ်စတစ်လက်သီးနှင့်ခြေထောက်၊ ဘောင်းဘီနှင့် chromey roundy headlight nips အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ထိုအခါငါသူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတစ် ဦး အနည်းငယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းသောကြည့်ရှုကြောင်းရ။ သူဟာ badass ရဲစွမ်းသတ္တိကိုသူမတောင့်တင်းတဲ့ခြေထောက်အမြင့်နဲ့အဆင်မပြေဘူး သို့သော်ယင်းကသူ့ရွယ်တူချင်းများထက်သူ့ကို ပို၍ နည်းစေသလော။ ဒါက G1 ဖတ်စာအုပ်ပါ! သူလိုချင်တဲ့ငွေလိုငွေအိတ်နဲ့ဒုံးပျံပစ်လွှတ်တယ်၊ အဆိုပါပီသသောရဲ့ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျသနားစရာ, သူသည်ကြားမှပျော်စရာနေဆဲပါပဲ။ ဒါကငါတို့ G1 အကြောင်းကိုကြိုက်တယ်! ဒါကရရှိသွားတဲ့အဖြစ်အစစ်အမှန်ပါ! Skids သည် '' ပထမလှိုင်း '' 80s kitsch ဘဝဖြစ်ပြီးသူအားသင်အတည်ပြုရန်သင့်အားမလိုအပ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါလုပ်လိုက်တယ်။ သူကသူကချောမောတယ်လို့သူ့ကိုပြောပြပါ ပြောပါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု - လူကဲ့သို့ပင် - တွန်းလှန်! ရုံကြော့နှင့်ရှုပ်ထွေးခေါက် -Down crumplestiltskids မျိုးကိစ္စ ငါခေါင်းကိုခတ်ပါးပျဉ်းပါးပျဉ်းမခေါ်လိုတဲ့ထူးခြားတဲ့လက်မှတ်ကိုင်တွယ်နှင့်အတူ! လိုပဲ, ဘောနက်ပွင့်လင်းရုတ်တရက်နှင့် robo ခေါင်းကိုပတ်ပတ်လည်လှည့်နှင့်ခေါက် ဒီတော့သူကများစွာသောသူတို့လုပ်ပေးကြောင်းအရုပ်ဆိုးလည်ပင်းပျက်ပြယ်ရှိသည်မဟုတ်ဘာကြောင့်။ ၎င်းသည်အပြင်းအထန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီ Honda City Turbo alt mode ဟာသိပ်ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ! ငါသိတယ်၊ မင်းသိတယ်ငါကအပြာရောင်အနိမ့်ဆုံးမော်တော်ကားစီးသူတစ်ယောက်ပါ။ Skids ကတော့အပြာရောင်အပြောအဆိုပါပဲ။ ငါ့ကိုငါအရည်ပျော်ရုံတင်မကဘဲငါ့ရဲ့အားနည်းချက်ပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စပျစ်သီးအရုပ်ကစားနည်းကိုအကဲဖြတ်တဲ့နေရာကရော်ဘာတာယာတွေ၊ နှင့်သေနည်းနည်းစုဆောင်းသူများတပ်မက်သောသွန်းလေ၏ အလုပ်လုပ်သောတံခါးများနှင့်ဘွတ်ဖိနပ်များသည်၎င်းကိုခေတ်ပေါ် Autobot ကားများထက်နည်းပညာပိုင်းအရပိုမိုပြည့်စုံကောင်းမွန်စေသည် ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့အော်ဟစ်နေတယ်။ တစ်နေ့လုံးဒီအရာကိုသိမ်းပစ်ချင်တယ်။ ငါကခေါင်းတစ်လုံးတည်းကိုဟမ်းစတားလိုဆုပ်ပြီးစပျစ်သီးပျဉ်နဲ့ကျွေးတယ်။ ငါမှော် ဤလောကသည်ဤအရာကိုမနှစ်သက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာဒီ ၅၀ လုံးမရှိဘူးလား။ ငါမသိဘူး။ ၎င်းသည် sexy အားကစားကားသို့မဟုတ် badass စစ်ပွဲမိုဘိုင်းနှင့်မတူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီတစ်ခုကိုပျင်းစရာနောက်ခံကိုပေးလိုက်တာပဲ။ 'မင်းအလုပ်လုပ်နေတုန်း' ကြောက်မက်ဖွယ် Hatchback ဖြစ်ချင်တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဂြိုလ်သားစူပါကားများအဖွဲ့နှင့်အတူလား။ ဤကဲ့သို့သောအရာသည်သင့်အား megastar တစ်ခုဖြစ်စေသည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည် Skids ကိုလက်တွေ့တွင်ပိုမိုခိုင်မာစေသည် နောက်ပြီးစက်ရုပ်ကနေငါလိုချင်တာပိုရမယ် ဤအရာလေးခုသည်ကျွန်ုပ်၏လမ်းပေါ်တွင်ယခုပင်ရောက်နေနိုင်ပြီးမမြင်ရသောမျက်ခုံးကိုပင်ငါမပေါက်စေနိုင်ပါ။ ဒီသပ်ရပ်နေတဲ့လမ်းဘေးပြေးလမ်းဟာ Lamborghinis အာကာသယာဉ်တစ်စီးနဲ့ပြိုင်ကားမောင်းပြိုင်ကားတစ်စီးလိုမျိုးလှပတဲ့ကလေးတွေထက်နည်းနည်းလေးပိုပြီးဆက်စပ်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အသရေထင်ရှားသောအချင်းမိန်းမတို့၊ သင်ရောနှော။ နေလော့။ Drive ကိုမမြင်ရသလော။ Doot-de-doot-de-doooo! Ooh, ထိုကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသော Tiny Car Mode ကို Doot-de-Doo ရဲ့ ... ကုန်ပစ္စည်းများ! ဒါဆိုငါဆိုလိုတာကမင်းသိလား Skids သည်ထူးခြားထူးခြားသည့်ဒီဇိုင်းနှင့်စိတ်ရောကိုယ်ပါကြည်လင်သည့် Autobot နှလုံးပါသောတကယ့် singular starlet ဖြစ်သည် သူသည်ဒိုင်ယာလိုနီအားမူလတင်သွင်းခဲ့သောကားယောက်ျားလေးများထဲမှအများဆုံးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုတာကသူဟာ Transformers မှာသိပ်အသုံးမ ၀ င်တဲ့အတွက်ဒီဟာကို Diaclone ကစားစရာလို့စဉ်းစားရတာပိုပြီးသဘာဝကျပါတယ်။ ငါကအခြေခံတွေအများကြီး၊ Toy Galaxy အရမ်းများလွန်းတယ်၊ ဒါမျိုးရှိရင် - ဒါပေမယ့်ငါကဒီကစားစရာကို Takara တီဗီကြော်ငြာအချို့မှာရှိတဲ့ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းတဲ့အပြာ - ကောင်းကင်ပြာမြို့တစ်မြို့ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်။ ထက် ... Decepticons မှာ shootin 'လေဆာရောင်ခြည်? သူမလုပ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုစိတ်ထဲထားပြီးတောင်မှ၊ ဒီဟာငါ့အတွက်၊ Skids လိုတကယ်ပဲခံစားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးတရားဝင် Skids ကစားစရာပဲ။ လွမ်းဆွတ်မှုကိုစွဲလမ်းနေသောကမ္ဘာတွင်ပင် Skids သည်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောပြန်လည်ပတ်မှုများစွာကိုအမှန်တကယ်မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ဆိုလိုတာက Skids လေးတွေနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အားလုံးကထူးဆန်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုတွေ၊ ဥပမာ… Robots In Disguise Skid-Z ၏…အားလုံးကောင်းပါပြီ၊ ၎င်းသည်ယောက်ျားနှင့်မတူသည်မှာသေချာသည်၊ သို့သော်သူ၌နာမည်ရှိသည်။ Skid-Zuh ကဘာလဲ။ Skid-Zee? Skid-Zed? အဲဒီ Gobot-မြည်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ , အနားယူ -Q အပေါ်လာကြ! သို့သော်ကြည့်ရှုပါ၊ ဤနေရာတွင် RID Skid-Z သည်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်မှာသေချာသည် သူသည် Formula 1 ယာဉ်မောင်း၏တစ္ဆေကိုမတော်တဆစစ်ဆေးမိသောကြောင့် turbo-revvin 'compulsive racing စွဲသောငယ်ရွယ်ပန့်ခ်' အဖြစ် ဒီတစ်ခါလည်း Skid-Z ကိုသရဲခြောက်တယ်လို့! တောက်ပ။ ဒီတော့ဒီမှာ Zedhead ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှိမ့်ချတဲ့ Hondabot နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတာထင်ရှားပါတယ် - သူကသူဟာ Machine Wars Mirage ပုံကိုအခြေခံပြီး Mirage-a နဲ့တူတူပဲ အရာ၌အလှည့်အတွက် G2 ကနေဖျက်သိမ်းဒီဇိုင်းအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ အဲ့ဒီတုန်းက RID, Machine Wars, Robot Masters, Beast Wars II တွေအများကြီးရှိတယ်။ သူတို့တွေအားလုံးဟာ G2 overspill နဲ့အတူတူပဲ။ သို့သော်ထိုသူအချို့အစိုင်အခဲကိန်းဂဏန်းများလူဖြစ်! သူတို့ကအရေးယူမှုအနည်းငယ်ထိုက်တန်ပါတယ်။ သူတို့ဟာရယ်စရာကောင်းတယ်၊ သူတို့မှာအများကြီးကမ်းလှမ်းလို့ရတယ်၊ ၅ နှစ် ၆ နှစ်လောက်တကယ်ချိန်းတွေ့တာမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူး။ စိတ်ဓါတ်များ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စက်ရုပ်ပုံစံသည်အလွန်အမင်းမလှုပ်မရှားနိုင်လောက်အောင်ကြီးလွန်း။ ပြိုင်ကားစီးသောရင်ဘတ်နှင့်အဆင်မပြေသောခြေလက်အင်္ဂါများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဒါပေမယ့်သူကအခုထိအားလုံးကောင်းနေတုန်းပဲ။ ဒီရဲရင့်တဲ့အရောင်ရင့်ရောစပ်ပြီးရောစပ်နေတဲ့သတ္တုစိမ်းပြာလေးကိုသူကြည့်လိုက်တယ်။ \_ t တချိန်ကအဖြူရောင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးခြင်းသို့မဟုတ်မဖြစ်ခြင်းသည်ကောင်းကင်အလင်းရောင်အားပြင်းစွာစီးဆင်းခြင်းနှင့်အေးမြသောကြားနေအဝါရောင်ဖြစ်သည်။ Gimmick ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်း G2 ရဲ့ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့သူဟာဒီ ace flipchange automorph လီဗာပတ်ပတ်လည်မှာသဘာဝကျပါတယ်။ နှင့်ဤ flamboyant F1 mode ကိုများအတွက်, သူကပြောတယ်အချို့အသွင်ပါ! ၎င်း၏ချောမွေ့သော cruisin 'groove နှင့် ballsy ပြိုင်ကားခုတ်နှင့်အတူထွက်စစ်ဆေးပါ! ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်ပဲဖြစ်ရင်တော့မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုတော့ရှိပါသေးတယ်။ kinda cream ဆိုဒါအရောင်များနှင့် Coca-Cola ဖဲကြိုးနှင့်အတူ kinda 50s ကိုခံစားရသည်။ \_ t Coke float လိုပဲ နှစ်ဆကျယ်သောတောင်ပံပုံစံများနှင့်အတူအချို့သောဂန္ထဝင် Chevy fender မီးသီးများ flashin '! ဒီဟာသည် gettin ကဲ့သို့ယနေ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်သည်! ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်တခါဒီလူတစ်ယောက်ဟာ Armada Mini-con ပေါ်လာပြီးနောက်မှာတော့ Skid-Z နာမည်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်တစ် ဦး shitty တ ဦး တည်း! သူတို့ဟာအမှန်တကယ် Armada ကစားစရာပစ္စည်းတွေအတွက်အကြံဥာဏ်တွေကုန်သွားတဲ့အခါမှာပဲသူတို့ဟာ Beast Wars Transmetal recolours ကိုအရောင်တောက်ဖို့လိုလာတယ်။ နောက်ပိုင်းလှိုင်းများကိုစုဆောင်းရန်နှင့် Skid-Z သည်သူတို့ Mini-con ပေါ်တွင်ရိုက်သည့်နာမည်သာဖြစ်သည် - သူတို့ထဲကတစ်ခုနှင့်အတူပစ်ချကြောင်း Mini- cons နှစ်ခုထဲကတစ်ခု! slummin '' အကြောင်းပြောဆို! Skid-Z-List လိုပဲ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲဒီ့ကိုကျော်ပြီးသွားမယ့်အစား Skids ရဲ့ Alternators / Binaltech ရှိသူ့ရဲ့ blocky blue bod ဆီကိုပထမဆုံးအောင်မြင်တဲ့တစ်ပိုင်းတစ်စပြန်လာခြင်းကိုရှေ့ဆက်သွားနိုင်ကြပါမယ်။ - မျဉ်းဖြောင့်သောကြောင့်နှစ်ဆတိုးဟု - ၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းကစပြီး G1 ပြန်လည်ရှင်သန်လာတဲ့အရာတွေပါ။ ဤသည်မှာ ၁၉၈၄ မှာမူလပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Skids သည်လိဂ်ကြီးများတွင်သူ၏နေရာကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သင့်သည်။ ငါပြောတာကိုငါမုန်းတီးသဖြင့်သူသည်ဟာသတစ်ခုဟုထင်ရပါသလား။ '' ဒီသွေးထွက်သံယိုအရာကိုကြည့်! အဲဒါ dorkus ပဲ! ဒါဟာထူးဆန်းတဲ့ sloping ဘီယာဝမ်းခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားနှင့်အတူဒါ droopy နှင့် daft ချွတ်လာပါတယ် မိမိအလိုက်တယ် weedy လက်နက်များနှင့်စိတ်ဆင်းရဲနည်းနည်းပစ္စတို dwarfing ။ ဒါပေမယ့်နေဆဲက kinda တောက်ပပါ! သင်လိုချင်တာကိုပြောပါ၊ သူ့မှာအမြင်အာရုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့အပြုသဘောဆောင်နေတဲ့ Binaltech ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကိုသူသေချာပေါက်တွေ့နိုင်တယ် heftily ချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာ handfeel နှင့်ခမ်းနားထည်ဝါစွာ labyrinthine အင်ဂျင်နီယာ သူတို့အားတရားဝင် headlgihts နှင့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော bumper, လေးလံသောအနက်ရောင်ပခုံးကြိုးနှင့်အမြဲ - အပေါ်တက်ကြွသောစတီယာရင်! ပြီးတော့ခြေထောက်တွေက shit လိုပါးစပ်ဖျားကျတယ်၊ မင်းတို့မှာဒီအဓိက shin bumpers၊ ငွေကြွယ်ပေါင်တွေ၊ နှင့်ဤ dumpy trapezium ဖိနပ်ဒါ disarmingly အရည်အချင်းမရှိဘူး! ဤအရာကိုတင်ထားပါ - သင်ဤအရာကိုမည်သို့မေ့လျော့မည်နည်း။ ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းသော Autobot စွမ်းအင်နှင့်မတူနိုင်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးနေသောသဘာ ၀ ကျသော chungus ဖြစ်ပြီးလျစ်လျူရှုခံရမည်မဟုတ်ပါ ဒါကလူသားပဲ။ လိုပဲပင် Binal ကောင်လေးတစ်ယောက်အတွက်၊ သူ၏လုံးလုံးလျားလျားရှိသောဒေသတစ်ခုလုံးသည်တုတ်ချောင်းဖြင့်ခေါင်းတစ်ချက်ဖြင့်အခြားတုတ်တစ်ချောင်းကိုဆန့်ထုတ်လိုက်သည်။ \_ t စာသားအရ everythig လှန်ခြင်းနှင့်လှည့်ခြင်းနှင့်ထို့နောက်သူ၏လက်ရုံးသည်သူ၏လည်ပင်း၏နောက်ကျောသို့အောင်းနေနိုင်ပါတယ်!? ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သင်ဟာ Transformer ရဲ့စိတ်အားထက်သန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သုတေသနအတွက်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သင့်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်၊ Binaltech က Skids အဟောင်းတွေကို Toyota ကလေးလိုမွမ်းမံဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်။ Binaltech သည်၎င်း၏ကားမော်ဒယ်များပေါ်တွင် ရှင်သန်၍ သေဆုံးသည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့ကသူတို့က '' Transformer သို့လှည့်ခဲ့တာလဲ ပြိုသည်! ဒါကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့၊ ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့တံခါးလေးပေါက်၊ တကယ်တော့တော်တော်အေးတဲ့နေရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အတွင်းပိုင်းတစ်ခု။ ငါဖော်ပြသင့်သည် - သူ၏ရှေ့ထိုင်ခုံတစ်ကြိမ်ထွက်ပေါ်လာသည်နှင့်ငါပဲငါ့အဘို့ဘဝကသူတို့ကိုပြန်အဲဒီမှာပြန်မရနိုင်ပါ, ဒါကြောင့်သူတို့ကတစ် ဦး ဆက်စပ်ပစ္စည်းယခု။ ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီတာကာဟာဒီမြက်မြက်မြက်မြောင်းထဲပစ်ချခံလိုက်ရတဲ့အဲဒီစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့ Smash-Mouth-ass flamp tampos မပါဘဲ။ အဲဒီမှာ Cheeky သံချေး patch ကို။ အပိုဆု ငါသည်လည်းဤအကြောင်းတစ်ခုခုတစ်ခုခုဟာ Alternative သွန်းထဲကနေသိသိသာသာပျက်ကွက်ခဲ့ Ironhide ၏, ကျိန်းသေအနံ့ကြောင်းပြောရန်မလွှတ် နှင့်၎င်း၏ roundy ridgey သံခမောက်လုံးနှင့်အတူဤ chunky ရထားကိုသူ့အဘို့စုံလင်သောမထိုက်မတန်ကြလိမ့်မည် ဒါပေမယ့်ငါထင်တာတော့တိုယိုတာကိုယ်စားလှယ်တွေကအပြာရောင်ကိုပြောတာပဲ။ ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာသူ့ကို Skids အတွက်ခွဲထုတ်လိုက်တာလား။ ငါမသိရပါဘူး, တကယ်တော့အဘို့, ဒါပေမယ့် Skids ကိုင်တွယ်ပုံကိုအလွန်ပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်! ဆိုလိုတာကတစ်ပေါင်ပေါင်။ ဒါကအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံး Skids ကစားစရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ပြင်ပတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရန်နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ သငျသညျပွုရမညျ Fatshame - ဒီအထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Binaltech Skidneybean ဟာတော်တော်လေးကိုကောင်းကောင်းကိုင်မိသလိုခံစားရတယ်။ အဲဒီခေတ်တစ်ခုလုံးကလူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီလိုပဲ Transformers တွေကိုမူရင်းလက်တွေ့မော်တော်ကားစိတ်ဝိညာဉ်ဆီပြန်ယူလာဖို့အရမ်းကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးနေပုံရတယ်။ ၎င်းကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည် friggin 'ဟုဆိုလိုသည်။ ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ငါရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားချက်တွေရောထွေးနေသလောက်ဒီဇိုင်းအတွေးအခေါ်ကိုအမြဲတမ်းခုခံကာကွယ်သွားမှာပါ။ '' ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့အရသာနဲ့လုံးဝမတူဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုအမြဲတမ်းရှာနိုင်ခဲ့တယ်၊ လူတွေအများကြီးကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါ၊ \_ t ၎င်းသည်အလွန်ခိုင်လုံသောတရား ၀ င်မှုနှင့်အခြားသောလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များသို့ငွေရေးကြေးရေးအရအထောက်အကူပြုသည်။ သင် Titan Class Scorponok ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်၊ Bumblebees တွေအများကြီးရောင်းပြီးသွားမှာလား။ ငါတို့သိတယ်။ ငါလိုပဲ #NotMyTransformers ၏အတွေးအခေါ်ကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာသကဲ့သို့ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏ Skids များမဟုတ်ပါ။ မင်းရဲ့ Skids တွေကိုမကြည့်ချင်ဘူး သူကဒီ Skids နှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှရတယ်လိုမဟုတ်ဘူး! ငါတို့တွေ့ခဲ့ရသလိုပဲ၊ ကျနော်တို့မျှဝေနိုင်ပါတယ်။ ငါဟာ "ငါ့ရဲ့ကလေးဘ ၀ ပျက်စီးသွားတယ်" ကောင်လေးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာပဲ, ဒီကောင်လေးယူတာပဲ! “ မင်းအကြောင်းငါမသိဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါအတွက်တော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတွေအတွက်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲလိုလို "hm၊ ဒါကသူနဲ့မတူဘူး!" "Ratchet အစိမ်းမဟုတ်ပါဘူး!" ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုဟာလက်ခံဖို့မခက်ဘူး။ Soundwave လိုပဲ Soundwave နဲ့မတူဘူး။ ဒါပေမယ့်သူကအဆင်မပြေတဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေလုပ်နေတယ်၊ ​​သူကသူ့မှာစပီကာတွေရှိတယ်၊ နာမတော်ကိုမျှဝေသူများနှင့်ပင်၎င်းကောင်လေးနှင့်ခွဲခြားရန်မှာမလွယ်ကူပါ။ လိုပဲ၊ အဲဒါဟာငါသိတဲ့ Hot Rod မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အဆင်ပြေတယ်! မင်းဘာရလဲဆိုတာကြည့်ရအောင် ဒါပေမယ့် Skids နှင့်အတူကပိုတူရဲ့f** မင်းအတွက် သူကစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့ dumbass ရုပ်ရှင်မှာတမင်တကာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ဇာတ်ကောင်ပဲ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြောက်မက်ဘွယ်သောဒီဇိုင်းနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြား overtones နှင့်သူတို့ဒါကြောင့်သိသာသူ့ကို shids "အမည်ရှိသောကြောင့် shitting တူသောအသံကြောင့် ငါတို့ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ lowbrow level ပဲ။ browest ၏နိမ့်ဆုံး။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကစားတဲ့အတိုင်းကစားစရာမကောင်းဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြိုလဲနေသောကစားစရာများ၏လက်စားချေခြင်းသည်အလွန်ကြီးသည်။ လိုသလိုပြုလုပ်ထားတယ်၊ အသေးစိတ်လုပ်ထားတယ်၊ ကြွယ်ဝတယ်။ ၎င်းသည်အမြင်အာရုံအားဖြင့်အနည်းငယ်အလုပ်ရှုပ်ကာအလွန် kibblesome ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည်ထိုအရာနှင့်တူသည်။ ပီသသောအရာအားလုံးကောင်းပါတယ်, သူကရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်အသုံးမကျပေမယ့်အတားအဆီး gimmicks အချို့ရှိပါတယ် ... (ရယ်သံများ) လာကြ! (wheezelaughs) ... နှင့် filmformers များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချသကဲ့သို့, ကားကို mode ကိုရဲ့အမှန်တကယ်တော်တော်လေး snazzy ။ ဒါဟာကျော့ကွင်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီကစားစရာနဲ့ပြtheနာကဇာတ်ကောင်ရဲ့ကစားစရာတစ်ခုပါ။ ငါသူ့ကိုမုန်းတယ် သူ၏မျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ ဒီကောင်လေးကိုဝက်အူ ငါဒီဟာရိုင်းစိုင်းသောအယူအဆတစ်ခုလို့မထင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Skids and Mudflap ဟာ Transformers ရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ကန်ကန်သူကဒီ Skids တွေဟာငါကြိုက်တဲ့ Skids တွေထက်အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာပဲ။ ဖန်သားပြင်ပိုကြာလေလေ၊ ကစားစရာများများလေလေ၊ ဒီ dipshit snidsgoblin သည် Skids ၏အဓိကဗားရှင်းဖြစ်သည်။ သူကအဆိုးဆုံး Skids ပဲ! သူက Skids ရဲ့လူကြမ်းကြီးလိုပဲ။ Friggin 'Jolt သည် Skids များထက် Skids များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ သူသည်ပြdistနာတိုင်း၏အကြွင်းမဲ့အနှစ်သာရသာဖြစ်သည်၊ ရုပ်ရှင်များသည်ပိုမိုများပြားလာပြီးတစ်နည်းနည်းဖြင့်အနိမ့်ဆုံးကျဆင်းသွားသည် မင်းရဲ့ ဦး နှောက်တွင်းထဲကိုတိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းလိုက်ပြီးငါတို့အားလုံးဟာအတွေ့အကြုံအတွက်တော့ပိုဆိုးသွားတယ်။ ဟမ် ပုံနေဆဲအနာ။ ဒီ Legion အတန်းအစားကိုမွန်းတည့်မှ Moon of Dark ၏သူမကြာခဏမြင်တွေ့ရသော cybergoth deco ဖြင့်ခဏမျှပစ်သင့်သည် ဝန်ခံရမည်အလွန် Skids ပြောင်းရွှေ့သောအရာကို၌သူသည်ရုပ်ရှင်ထဲကနေကျဆင်းသွားခဲ့သည်! Ahh, သင်ကကြည့်ဖို့မုန်း၏။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြာခင်မှာပဲသူကသူ၏အပြာရောင်အမြစ်များကိုပြန်ရောက်လာသောအခါအမှုအရာမကြာမီ Skids များအတွက်နည်းနည်းတက်ခူး ၂၀၁၃ မျိုးဆက်များအတွက်အခန်း အခုသင်ငါ့ကိုသိတယ် မျိုးဆက်တွေကငါ့ရဲ့ယိုပဲ။ Movieverse ကငါ့ marmalade ပါ။ Beast Wars ဟာငါ့အတွက်ပဲ bovril ။ ဒီတော့ဒါကငါတို့အချိန်ကပြန်သုံးသပ်တဲ့တစ်ခုပါ။ ဒါကိုမကြည့်နဲ့ အသက်ကြီးလာပြီ။ ဒါပေမယ့်အဲဒီအချိန်တုန်းက Generation တွေလှုပ်ရှားနေတဲ့လမ်းကိုငါတကယ်ပျော်ခဲ့တယ်။ သူတို့တွေဟာ IDW ပုံစံမျိုးကိုကြိုက်ခဲ့ကြတာပါ၊ Jhiaxus နဲ့ Chromia တို့လိုမြေအောက်ပန်ကာပရိသတ်တွေဟာ သွားလာရင်း Armada နှင့် Beast Wars ၏နည်းနည်းကြောင့် rad ပဲ! ဘယ်မှာသွားနေလဲလို့မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ မျှမျှတတပြောရရင်နှစ်လလောက်တော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Prime War တွေ ၀ င်လာပြီးလူအုပ်တွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ G1 ထဲကိုပြန်အရောက်ပို့ပေးတယ် တိုင်ကြားလို့မရဘူး ငါချုပ်စစ်ပွဲများကိုချစ်၏။ ငါလူအစုအဝေး - နှစ်သက် G1 ကိုချစ်။ ငါလူအုပ်ကြီးထဲမှာပါ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောရုတ်တရက်ဗေဒပြောင်းလဲမှု kinda Skids နှင့် Trailcutter နှင့်ထွက်ခွာခဲ့တယျ ... အအေးမိနေတဲ့ Mini-con အရာက 'အခုသူတို့လူအုပ်ထဲကနေထွက်လာကြပေမယ့်မှားယွင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်! ဒီဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ထွက်ခွာသွားတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပanိပက္ခဖြစ်တာပဲ။ ပြီးတော့ဒါကမကောင်းဘူး။ လိုပဲ, ငါနေဆဲနည်းနည်းစူပါမီနီ alt-mode ကိုချစ်ကြတယ်, နှင့် Head Hood ကို Flip Flap ကိုအရေးယူအနည်းငယ်ကိုကြည့်ဖို့အမြဲကောင်းပါတယ်။ Skids ယဉ်ကျေးမှုပဲ။ သို့သော်ကဲ့သို့, အရောင်အားလုံးမှားယွင်းနေသည်။ ခြေများသည်မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သည်။ ပခုံးကခွေးတွေပဲ! မျက်နှာသည်တည့်တည့်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပြီးသေနတ်များသည်အလွန်အမင်းလျော်ကြေးပေးခြင်းမှထွက်ပေါ်လာသည်။ သိပ်ပျော်စရာမကောင်းဘူး! ပြီးတော့ Skidney Poitier အတွက်ကြီးမားတဲ့ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုလိုခံစားခဲ့ရလို့ဒါဟာအလွန်ရှက်စရာကောင်းတယ်။ နောက်ဆုံးတွင်သူသည်ရုပ်ပြများတွင်ကောင်းမွန်သောပြေးဝင်ကစားခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ Megalearning ၏စူပါပါဝါနှင့်အတူ! Friggin 'nerd ။ Skids ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်လျက်ရှိသည့်အချိန်ကာလ၌ပင်သူသည်နိမ့်ကျသောနိဂုံးနှင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အားလုံး 3, 2, 1 မှာဖျက်လိုဖျက်ဆီး သူသည်မိမိကိုယ်ကိုအလွန်ရှက်ကြောက်လာပြီးသူ၏စိတ်ဝိညာဉ်ပေါက်ကွဲပြီးသူသေဆုံးချိန်အထိတိတ်တဆိတ် slunk, မျက်နှာကိုငုံ့လျက်၊ ပြီးတော့စကြဝuniverseာရှိသူ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကသူမ၏မှတ်ဥာဏ်အားလုံးကိုသူ့ ဦး နှောက်မှခွဲစိတ်ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ (ညည်းတွားသံများ) ဒါဆိုငါ့ကိုရအောင်လုပ်ပါ၊ ဒါဘာလဲ? Megatron အဲဒီမှာရှိပြီးသူကအားကောင်းနေလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တကယ်မလိုအပ်တဲ့ယာယီအသင်းသက်သက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုလား။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကဘယ်သူမှ shit ကိုမပေးခဲ့ဘူးဆိုတာနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်။ သူမရဲ့အကောင်းဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်ကအရှုံးမပေးဖို့ထွက်သွားတာပဲ။ ငါကပိုရှင်းနေတာပဲ။ လိုပဲ - Skids တစ်ချိုးဖမ်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်လား? စကြာဝtheာသည်ဤကောင်လေးအားအလွန်အမင်းမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်းမှသတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်မည်သည့်အောင်မြင်မှုမျိုးကိုမဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပါသလား။ အခြားလူမျိုးများ၏စိတ်ထဲမှ!? သငျသညျသူ့ကိုမှနောက်ထပ်ဘာလုပ်နိုင်မည်နည်း ငါတို့မော်လီကျူးတစ်ခုစီကိုငါတို့တစ်ယောက်ချင်းစီဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာလား။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်မလေးစားမှု! ကောင်းပြီ၊ ဒါကဖျက်လိုဖျက်ဆီးတွေရဲ့အဆုံးပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့အခုဘယ်မှာလဲ နောက်ဆုံးပေါ်ကဘာလဲ ကောင်းပြီ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပြည့်နဲ့ငါတကယ်ဒီဗီဒီယိုကိုနည်းနည်းလေးအောင်လုပ်နေတာပဲ ငါ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုက War For Cybertron trilogy အယူအဆကနေလာမယ့် Skids အသစ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ် ၎င်း၏ဘတ်ဂျက် Masterpiece ဗေဒနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ track record နှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၌ဖြစ်လိမ့်မယ် Skiddy ကောင်းမြတ်ခြင်း၏နံ့သာမှုနှင့်အတူမည်သည့်အရင်းအမြစ်ကိုမဆိုဖော်ထုတ်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ol 'Steak နှင့် Skidney ၏နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲဖြစ်သည် အရာရာတိုင်းဟာနွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့မှေးမှိန်နေခဲ့တဲ့အချိန်တိုအတွင်းကဖြစ်ပျက်လာတာပါ။ သူတို့ဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားခဲ့တာကိုငါရူးလို့မရဘူး၊ ၇ နှစ်ကျော်ပြီ အခြားလူတိုင်းတစ် ဦး လုပ်ပေး - ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်! Chromia, friggin '' တငျမွှောကျ, Doubledealer, Springer! လူတိုင်းက Springer ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသူကနောက်ထပ်တစ်ခုရသေးသည်။ ဒါပေမယ့်မ Skids! ကျွန်တော်တို့ဟာဒီခေတ်မမီတော့တဲ့ပိုးသတ်ဆေးဖြူနဲ့လုပ်နေကြတုန်းပဲ။ Skids မှအပဇာတ်ကောင်တိုင်း၏နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော G1 ဗားရှင်းများကိုယခုကျွန်ုပ်တို့မွမ်းမံထားပြီဟုမယုံနိုင်ဘူး။ Generation Skids သည်ဤအခြေအနေမျိုးတွင်ရောက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးကစားစရာဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုဖန်တီးသူအနေနဲ့ငါဟာတစ်နေရာရာကိုအမြင့်ဆုံးရောက်အောင်ဗီဒီယိုတွေကိုကြိုက်တယ်။ ငါတို့ယောက်ျားလေးကိုမပြီးသေးတဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုပေးရမယ်။ ငါတို့အဲ့ဒီဟာကွက်ကိုလိုတယ်။ ထိုအဘို့, ငါကျနော်တို့တရားဝင်အချိန်ဇယားကိုစွန့်ခွာခြင်းနှင့်အစားလိုင်စင်မဲ့ဝါသနာရှင်များ၏တောထဲသို့လမ်းလွဲသွားရမည်ကိုကြောက်တယ်! WoOoOoOoOoOo! ဟုတ်ကဲ့အမှန်ပါပဲ၊ သင်ဟာ X X Transbots တွေဖြစ်တဲ့ Stalwart Third Party တိရိစ္ဆာန်များမှ Master X Series Savant အတွက်လုပ်ပေးပါ ငါတို့အစဉ်အမြဲငါ Masterpie Skids ရလိမ့်မယ်အနီးဆုံးခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေတယ်! 'ဒါကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ ဦး ။ XTB Savant သည်သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ဇိမ်ခံကားနှင့်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသောအဆင့်အတန်းကိုကိုယ်စားပြုသောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောလှပသောအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည် ကြောင်း "အပိုင်းအစ" အဖြစ်ကရည်ညွှန်းဖို့ငါ့ကိုလိုအပ်သည်။ လိုပဲချက်ချင်းလက်၌အံ့သြဖွယ်ခံစားရ! ၎င်းသည်အလေးချိန်ရှိပြီးအစိုင်အခဲရှိပြီးချောချောမွေ့မွေ့သောအရည်အသွေးရှိသည့်ပလပ်စတစ်ခံစားမှုနှင့်အရသာရှိသောသတ္တုတို့ဖြင့်ချောမွေ့သည် - ဤချန်နယ်နှင့်မတူသည် အဆစ်များသည်ခိုင်ခံ့ပြီးတောက်ပ။ တုန့်ပြန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိခြင်း၊ စုဆောင်းထားသောအဆင့်အတန်း၏ပုံသဏ္ofာန်သည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် Friggin ၏ workaday Honda hood နှင့်အတူဖြစ်သည်။ အခုငါ့ဝိညာဉ်အရမ်းပြည့်နေပြီ။ ထူးဆန်းသည်မှာသူသည်လက်မှတ်ထိုးထားသည့်စတုရန်းမိုင်ကိုမရရှိသော်လည်း၎င်းသည်၎င်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်မမှန်သည့်လည်ပင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည် ဒါပေမယ့်ဘာပဲ! တောင်းပန်ပါတယ် ငါ့နှလုံးသားထဲကသီချင်းကိုမင်းမကြားနိုင်ဘူး ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဝေဖန်ရမယ်၊ ပြီးတော့ဒါကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရမယ်၊ ငါအရောင်တွေဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရောနှောမှုတစ်ခုလို့ပြောသင့်တယ်။ မင်းမှာဂန္တ ၀ င်တောက်ပတဲ့တောက်ပတဲ့မဲနယ်မြေတစ်ခုလိုပဲ ဒီတီဗီရှိုးအမှုန့်အပြာနဲ့အတူငါအလုပ်ဖြစ်တယ်ထင်လား အပြင်ကဇာတ်ကောင်တွေအားလုံး Skids ဟာကာတွန်းကိုးကွယ်မှုကုသမှုလိုအပ်မလိုငါမသိဘူး။ ထိခိုက်မှုမရှိ! ငါကြိုက်နေတုန်းပဲ၊ ကာတွန်းထဲမှသင်ထည့်သွင်းနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောသယ်ဆောင်ရမည့်အစစ်အမှန်များမှာအနီရောင်အစက်အပြောက်များရှိသည့်ပခုံးလက်ကောက်နှင့်အတူဖျော့ဖျော့လေးများဖြစ်သည်။ ရှည်လျားပြီးကျဉ်းမြောင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့အိပ်မက်လိုပါပဲ နှင့်တူသော ... blanched ဒူးထောက်? ငါမသိဘူး။ လက်နက်များသည်ဖန်သားပြင်ကိုအလေးထားပြီးနှစ်သိမ့်မှုသိပ်မရှိလှပါ။ ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့အမွှာ zap လေဆာညွှန်ပြစက်ဟာသူ့လက်ထဲမှာရှိသင့်ပေမယ့်မဖြစ်နိူင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ မင်းကသူ့လက်တစ်လုံးလုံးကိုဖြတ်ကြည့်နိုင်တယ် ပြီးတော့ဒီတစ်ခုကအားလုံးအိတ်တွေမရှိတော့ဘူး။ ငါမသိဘူး။ ဒါဟာသိပ္ပံနည်းကျသိပ္ပံဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်နည်းနည်းနဲ့နည်းပညာပိုင်းအရအတော်လေးအထောက်အကူပြုနိုင်တာပါ။ ဒါပေမယ့်သင်က Blitzwing ကိုထုတ်ယူတဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါဘူး! ဒါဟာလိုက်တယ်တစ်ခုပဲ လိုပဲ၊ ဒီဟာကအလွန်သေးငယ်သော၊ လိုအပ်နေသော၊ ကံဆိုးသောအမြောက်အများပါသောကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်မည်သည့်အရာကမည်မျှကြီးမားလှသည်ကိုပင်မထိပေ။ အဲဒါကျွန်တော့်ကိုအရာရာပေးနေတယ်။ သင်သာကြည့်ရပါမည်! ၎င်းတွင်ချိုမြိန်။ တောက်ပသောစင်းစင်းတံခါးများနှင့် windscreen ပစ္စတင်ငယ်များရှိသည်။ ၎င်းသည်ကားလေးပုံတစ်ပုံမှလုပ်ထားသောredရာမအနီရောင် brogues နှင့် shin များရှိသည်။ \_ t အဲလိုစားဖိုမှူးရဲ့နမ်းတာမျိုးရှိတယ်။ ဒါက sorta je ne sais quoi ။ ဒါကအင်း ... y'know, uh, အဲဒါကိုရရှိပါသည်, uh ... [The Touch "မိတ်ဆက်ခြင်း] Nah လွန်းသိသာ။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည်အလွန်အမင်းပြည့်စုံနိုင်သည်၊ သို့သော်အလွန်ထူးကဲသောတတိယပါတီ၏အခိုင်အမာပြောဆိုမှုမှာအလွန်အမင်းရှုပ်ထွေးမှုရှိသည်။ ခြေထောက်များနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အားလုံးသည်သင့်လျော်စွာမှန်ကန်ပြီးရိုးရှင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့်လက်များသည်ဤရှုပ်ထွေးသောအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်သေချာမသိပါ။ အဲဒီမှာအားလုံးသည်သေးငယ်သော tabs များနှင့်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုပြား၏လက်ဖျံပတ်ပတ်လည်လှည့်ပတ်ပြား၏အလွှာ ဒါပေမယ့်ကလေး, သင်အဲဒီမှာရသည့်အခါ!? ကြည့်ရတာဒီမှာ hyperbolic မလုပ်ချင်ဘူး ကျွန်ုပ်၏ဆောင်ပုဒ်၏တစ်ဝက်မှာ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကငါ့အိပ်မက်တွေရဲ့ကားပုံစံပဲ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အမှန်တကယ်လုံးဝတိကျမှန်ကန်သော Honda City Tubro ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်ုပ်မသိပါ။ ဒါကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ bumper grille လား၊ ဒါမှမဟုတ်ဘေးဘက်နောက်ကွယ်ကဓာတ်ဆီအဖုံးနဲ့ညာဖက်စတီယာရင်ရှိသလားဆိုတာငါမသိဘူး၊ \_ t ဒါပေမယ့်သူက Skids များကဲ့သို့ကြည့်ရှုပါကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပါပဲ! ၎င်းသည်နှစ်သက်ဖွယ်ရွှင်လန်းဖွယ်ကောင်းသော၊ ပျော်စရာကောင်းသောမြေကမ္ဘာသို့မော်တာအနည်းငယ်သာရှိသေးသည်။ ၎င်းသည်အလွန်အကျွံအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းကိုအလွန်အကျွံမသုံးခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ရှုပ်ထွေးသော ၀ မ်းနည်းစရာများကိုမထည့်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ကြည့်ပါ ဦး ။ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်။ ပြပွဲအပေါ်မေတ္တာနှင့်လက်ရာအများကြီးရှိပါတယ် သူတို့အားတောက်ပသောမျက်လုံးရှေ့မီးမှသည်မပျက်စီးနိုင်သောရော်ဘာတောင်ပံမှန်များနှင့် ... asspipe အထိ။ ဒါကသင့်ကိုတကယ့်ခံစားချက်ရှိတာပဲ၊ သုတ်ဆေးကကျွန်တော့်ကိုမဲနယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာငါ့ကိုရေကူးသွားစေတယ်! ကြည့်ရတာ Skids ဟာအအေးဆုံး Autobot ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သူကစျေးကွက်ကို havin 'တံခါးများမှာထောင့်မှန်အောင်ချခဲ့တယ်။ နှင့်ဤထွက်စစ်ဆေး, ဒီရယ်စရာပါပဲ။ သူတို့ဟာသူ့ကို Diaclone နေ့ကစပြီးခေါက်သိမ်းထားတဲ့ဆိုင်ကယ်လေးပေးလိုက်တယ်။ သူ၌ပင် Transformers ၌ဤမရှိခဲ့ပါ။ ဤသည် Pre-G1 ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါက Pre-1 ပါ။ ဒါကအစဉ်အဆက်ဖြတ်အနက်ရှိုင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်နက်ရှိုင်းတဲ့ဖြတ်တောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားတစ်ဖက်ကိုဖြတ်သွားသွားပါတယ်။ ဤသည်နက်ရှိုင်းသောဖြတ်ထွက်ပေါက်အနာဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤ box ၏ပရိသတ်မဟုတ်ပါ။ ဟုတ်တယ်၊ တူတူပဲ၊ ချစ်စရာကောင်းပြီးသေးငယ်တယ်၊ ဗီရိုဘယ်နေရာမှမဖြုန်းတီးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်၊ X-Transbots ကဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ကိုငှားလိုက်တယ်။ အလွန်များပြားသောဖောင့်! အရမ်းသေးတယ်။ အရမ်းရုပ်ဆိုးတယ်။ ဒီကရင် - ကရင်ရဲ့အမှားအယွင်းဆိုတာဘာလဲ။ မင်းဘာလို့ဒီလိုလုပ်မှာလဲ။ ဒါဟာပုံကောင်းတစ်ခုပါပဲ သင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် - အဲဒါ ... Deathsaurus ရဲ့ခွေးလား ကြည့်ရတာအသေးအဖွဲတွေကိုဖယ်ထားပါ၊ X-Transbots Savant ဟာသာယာလှပတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဤသည်သည်အဆင့်မြင့်လက်ရာတစ်ခုကဲ့သို့တူညီသောအလိုလိုကျလှနျးခွငျးအချက်တစျခုနှငျ့အတူနီးပါး - အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောစုဆောင်းစျေးကွက် Skids ပါ! ဒါကအစဉ်အမြဲကြည့်ရှုတော်မူခဲ့ပြီးငါ besotted ငါဖြစ်၏အကောင်းဆုံး Skids ဖြစ်ပါတယ်။ သင် XTB နှင့်အတူဆင်း? ဟုတ်တယ်၊ မင်းငါ့ကိုသိတယ် [voiceover] ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ၊ အချို့သောဥပဒေများကန့်သတ်ထားသည့် copycat ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်တရားဝင်အချိန်ဇယား၌ရေတွက်ခြင်းမရှိကြောင်းအချို့ကသိသည်။ ဒါဟာအားလုံးအိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အပြင်ဘက်။ အရည်အချင်း။ ပြီးတော့အစစ်အမှန်ကမ္ဘာရဲ့အေးစက်နေတဲ့၊ ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာသူဟာ Skids ရဲ့နောက်ဆုံးသိမြင်မှုအပေါ်ဇာတ်လမ်းကိုပိတ်ပစ်လိုက်သည် Q-Transformer ၌တည်၏။ ဝိုး။ ပိုကြီးတဲ့အဆင့်လျှော့ချပါ။ Q-Transformers မှာအမှားအယွင်းမရှိပါဘူး။ သူတို့ဟာအလွန်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ပျော်စရာပါ။ ငါသေချာပေါက်သူတို့ရဲ့စိတ်ပျက်ဖွယ်ချစ်စရာ super- ကီထိုင်ယူနီဖောင်း tump ပျော်မွေ့ နှင့်ဤ squishy နည်းနည်းကောင်းကင်ပြာအပြာရောင် Suzuki အလွန်အမင်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ဒီနည်းကလတ်တလောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာမြင်းကောင်ရေကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကအဲဒါဟာနောက်ဆုံးအမျက်တော်ခံစားချက်မဟုတ်လား။ Prowl နှင့် Ironhide ကဲ့သို့သူ၏အစ်ကိုများစွာသည်မွမ်းမံမှုများနှင့်လက်ရာမြောက်များစွာရှိသည် နှင့်လတ်တလောမကြာသေးမီကလွန်ခဲ့သော ၁၈ လအတွင်း EACH၊ အေးမြသောခေတ်သစ်ပင်မကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုဖြစ်သော AND Q-Transformers, Skids များကိုယခုခေတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း toyline တိုင်းမှဖယ်ထုတ်ထားသည်။ Hasbro ရဲ့ချမှတ်ခြင်း၏ဘိုအယူအဆအတွက်မျော။ နှင့်အရရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်ထူးခြားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသူဖြစ်သည် ဤကဲ့သို့သော stagnate ခွင့်ပြုခဲ့! လာစမ်းပါ! မျက်မှောက်ခေတ် Autobot မိသားစုသည်သေးငယ်သောရေတပ်အပြာရောင်စူပါမင်းနီများနှင့်အတူပိုမိုပြည့်စုံသောချိုမြိန်မှုကိုခံစားရလိမ့်မည်မဟုတ်လော။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငါခံစားရတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Skids တွေကမသင့်တော်ဘူးလို့ပဲ။ သူမလုံလောက်ဘူး သူကဈေးကွက်အလုံအလောက်မရှိဘူး သူဟာ Sideswipe လိုမျိုးမကောင်းဘူး၊ Sunstreaker လိုမျိုးစတိုင်ကျတာမျိုး၊ Wheeljack လိုအထင်ကြီးစရာကောင်းတာမျိုးဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ပါဘူး။ အခြားအရာများ၊ ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျ ပို၍ အေးသောအက္ခရာများနှင့်လှပသောထင်ရှားကျော်ကြားမှုများစွာသာရှိသောအခါ၊ ဒိုင်နိုဆောများနှင့်မည်သို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်လိုသည့်စိတ်မရှိသောသီအိုရီသမားကဘယ်လိုလဲ။ သူကအခြားကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်တောင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ သူကအခြားကောင်လေးပါ။ အဓိပ္ပါယ်မေ့လျော့ G1 ၏သား။ ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခါလည်းဒါဟာ Skids ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ပဲ! သူမကြာခဏမပြရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာသူမလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလက်တဆုပ်စာပြန့်ကျဲနေတဲ့လက်မခံတဲ့ပုံပန်းသဏ္appeာန်ကသူ့ကိုအချို့သောအရှုံးသမားကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုပေးလိုက်တာပဲ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Combiner (သို့) ကျောင်းအုပ်ကြီးတစ် ဦး (သို့) ချုပ်ချုပ်တစ်ယောက်အနေနှင့်နှစ်စဉ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းထက် ပိုမို၍ တန်ဖိုးရှိသောအရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ မြင်းစီးသူရဲများနည်းပါးသောအနိမ့်သောနာယကသူတော်စင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပို။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုလေးစားရန်လိုအပ်ပါသည်သူပဲ! ငါပြproblemနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်!? ငါပဲလား? ငါကသူ့ကိုဝန်းရံနေတဲ့အလှကိုကြည့်ပြီးစိတ်ဆိုးနေတုန်းပဲ။ သူလိုချင်သော hyper-specific အရာတစ်ခုတော့မရှိနိုင်လို့လား။ "Uuhh, Hasblow!" အဲ့ဒါငါမဟုတ်ဘူး ဟုတ်လား? ကြည့်လိုက်စမ်း၊ မင်းကြိုက်တဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီးသူတို့နေရာရှာဖို့ကြည့်ရတာနို့စို့ ပြီးတော့သူတို့အတွက်အောင်မြင်မှုနဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုလက်ခံချင်တာကသဘာဝပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Skid တွေအတွက်မဖြစ်ခဲ့တာတွေ၊ ဒါပေမယ့်ဘဝပဲ။ လူတိုင်းမလုပ်ကြပါဘူး။ ပြီးတော့ဒီပုံပြင်တွေအားလုံးတစ်လျှောက်လုံးငါ့ကိုပြောပြဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီအရာအားလုံးထဲမှာ Skids ရဲ့အခန်းကဏ္weကငါတို့ရှုံးတာပါပဲ။ မေ့လျော့ခံရဖို့ ဒါ့အပြင်ဒါကငါ့အတွက်ပဲ ... ... သူ့ကိုလွှတ်ပါ။ မဟုတ်ပါ။ Hasbro, ငါကသောကြာနေ့မှာငါ့စားပွဲခုံမှာ Transformers Kingdom Deluxe Class Skids ချင်တယ်။ Tonton, ငါ့ကိုသင်ချိတ်ဆက်ရန်ရှိသည်၊ အိုးကောင်လေး ဒါပျော်စရာပဲ! ငါ့ကို Skidses နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်သည်။ Rodimus Minor ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင် Opsimathics၊ Jolene၊ Chris နှင့်ဂျိမ်းစ်တို့၏အမည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ နှင့်သင်တန်း၏ပြပွဲကိုထောက်ပံ့ဘို့အာဒံကို Skarnes မှကြီးမားတဲ့နာယကကြွေးကြော်။ သငျသညျကလေးကအားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှလုပ်! ကောင်းပြီ! လုပ်ဆောင်စရာများစွာ သင် flipside အပေါ်ဖမ်း! Thew ၏ Awesome Transformers သုံးသပ်ချက်များကိုပိုမိုရယူရန်သေချာပါသည်။ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအယူခံဝင်ပါ၊
SKIDS: အများဆုံးမထီမဲ့မြင်ပြု Autobot
<text sub="clublinks" start="7.84" dur="3.52">အချင်းအသင်း၊ Er, ငါတို့ကြီးမားတဲ့ 'un' ကိုပြုရမည်လော ငါကတက်သည်တက်! ငါပုံစံခံစားရတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="11.36" dur="5.241"> ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်နေသောအာရုံကိုအငတ်ခံနေသော Autobot အားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်၏လက်ကိုယူပါ</text>
<text sub="clublinks" start="16.601" dur="6.639"> အထိန်းအကွပ်မဲ့သူ၊ ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသူ၊ ထုတ်ပယ်ခံရသူများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမလေးမစားပြုမူခြင်း၊</text>
<text sub="clublinks" start="23.24" dur="6.252"> ဟုတ်ကဲ့သူငယ်ချင်းများ၊ ဤအရာသည်နှစ်ရှည်ခံ Autobot ၏အတွေးအမြင် Skids များ၊</text>
<text sub="clublinks" start="29.492" dur="3.468"> ကစားသမားသစ်များနှင့်အခန်းကဏ္ new သစ်များအတွက်မကြာခဏလက်ဝယ်ရောက်ရှိနေသောသူ</text>
<text sub="clublinks" start="32.96" dur="5.777"> ဤသည်ညံ့ဖျင်း sod က၎င်း၏အစောဆုံးကာလကတည်းက Transformer နှင့်အတူရှိခဲ့သော်လည်းမဆုတ်မနစ်သတိမမူဖြစ်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="38.738" dur="4.302"> - ဒါပေမယ့်ဒီအိမ်တော်၌မ! Thew စတိုင်လ်သည်ယနေ့အတွက် Skids သည်သူ၏အကြောင်းပြချက်ကိုရရှိသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="43.56" dur="5.36"> ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ စကြဝ,ာမှာရှိတဲ့ Skidward ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ဒီနေရာဟာဂန္တ ၀ င်မီဒီယာတွေမှာအရမ်းနာကျင်နေတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="48.92" dur="5.717"> သူသည်နောက်ဆုံးတွင်အသက်သုံးဆယ်ရှိသူ၏အရှိန်အဟုန်ကိုထိမှန်သည်အထိသူ၏ရှိနေခြင်းတစ်ခုလုံးသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="54.637" dur="0.662"> အတူတူပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="55.299" dur="5.341"> ဆိုလိုတာကသူ G1 မှာဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလား။ လိုပဲသူဟာဖန်သားပြင်မှာပေါ်လာခဲ့ပေမယ့်သူကတော်တော်များများကကြည့်ရှုသူပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="60.64" dur="7.04"> သူတစ်ချိန်ကသူပြေးထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနောက်သူတို့သည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောစက်ရုပ်တစ်မျိုးမျိုးတွင်သူ၏သက်မဲ့ခွံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="67.943" dur="0.632"> ငါ့သူရဲကောင်း</text>
<text sub="clublinks" start="68.575" dur="4.705"> ပုံနှိပ်နေစဉ်သူသည်ချိုသောဆပ်ပြာရေမြှုပ်ရေချိုးနည်းကိုရခြင်းကြောင့်လူသိအများဆုံးဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="73.28" dur="4.48"> ဒါပေမယ့်သူမှတ်မိခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကတော့သူဟာမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="77.76" dur="2.56"> ဒါသူပဲ ဒါကသူ့လက်မှတ်ပြောင်းရွှေ့မှုပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="80.32" dur="4.48"> ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာကြီးကိုမှားယွင်းနေတာတွေလိုပဲငါဟာစီမံခန့်ခွဲမှုမှားယွင်းနေတာနဲ့အမျှခံစားရတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="84.8" dur="4.32"> ဆိုလိုသည်မှာ ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်း၌ Hasbro အဖွဲ့သည်ကြီးမားသောလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်</text>
<text sub="clublinks" start="89.12" dur="6.56"> ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရန်ဇာတ်ကောင်အမြောက်အမြားရှိခြင်းနှင့် Skids များသည်အက်ကြောင်းများမှတဆင့်ရွေ့လျားနေသည့်အစဉ်အမြဲရှိနေပုံရသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="95.68" dur="8.513"> သူသည် ၁၉၈၄ သို့မဟုတ် ၈၅ ခုတွင်ခိုင်မာသောနေရာမရှိဘဲစင်များပေါ်သို့ '' နောက်သို့တက်ရုံမျှသာ '' ခြစ်ရာ 'ကိုသယ်ဆောင်လာသည့်ကစားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="104.193" dur="4.767"> နောက်ဆုံးအလုပ်ခေါင်းစဉ်နဲ့အလွန်အမင်းမှိုင်းသောဇာတ်ကောင်ဇီဝနှင့်</text>
<text sub="clublinks" start="108.96" dur="4.458"> နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်များကိုအသုံးပြုနေစဉ် - poopoo ကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားစေသည့်နာမည်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="113.418" dur="7.197"> 'ငါ့အတွက် G1 Skids' ဟာအကောင်းဆုံးကားဟောင်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="120.64" dur="1.584"> ငါအလေးအနက် friggin ထိပ်ဆုံး ၃</text>
<text sub="clublinks" start="122.224" dur="4.976"> 'ဒါကြောင့်ထွက်စစ်ဆေး! ဒါကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ထူးခြားတဲ့ carformer ဒီဇိုင်းကိုယူတာပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="127.2" dur="2"> ပါးပျဉ်းရင်ဘတ်, တောင်ပံတံခါးများ, အားလုံး hits -</text>
<text sub="clublinks" start="129.2" dur="5.52"> ပြီးတော့ဘယ်သူကမှဆွဲထုတ်လို့မရတဲ့ထူးခြားတဲ့ chonky square lad style နဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုလုံးလုံးလုပ်ထားတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="134.72" dur="1.6"> အခြားဘယ်သူမှတကယ်ချွတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="136.32" dur="8.16"> သူကဂန္တ ၀ င်ငွေရောင်ငွေရောင်စတစ်ကာများနှင့်အတူအလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနက်ရှိုင်းသောသတ္တုအပြာရောင်ကိုအထူးသဖြင့်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောနည်းဖြင့်အရောင်တောက်ပနေသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="144.48" dur="5.28"> cheeky အနီရောင်ပလပ်စတစ်လက်သီးနှင့်ခြေထောက်၊ ဘောင်းဘီနှင့် chromey roundy headlight nips အနည်းငယ်သာရှိသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="149.76" dur="2.595"> ထိုအခါငါသူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတစ် ဦး အနည်းငယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းသောကြည့်ရှုကြောင်းရ။</text>
<text sub="clublinks" start="152.355" dur="6.365"> သူဟာ badass ရဲစွမ်းသတ္တိကိုသူမတောင့်တင်းတဲ့ခြေထောက်အမြင့်နဲ့အဆင်မပြေဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="158.72" dur="3.36"> သို့သော်ယင်းကသူ့ရွယ်တူချင်းများထက်သူ့ကို ပို၍ နည်းစေသလော။ ဒါက G1 ဖတ်စာအုပ်ပါ!</text>
<text sub="clublinks" start="162.08" dur="5.12"> သူလိုချင်တဲ့ငွေလိုငွေအိတ်နဲ့ဒုံးပျံပစ်လွှတ်တယ်၊</text>
<text sub="clublinks" start="167.2" dur="4.141"> အဆိုပါပီသသောရဲ့ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျသနားစရာ, သူသည်ကြားမှပျော်စရာနေဆဲပါပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="171.341" dur="3.539"> ဒါကငါတို့ G1 အကြောင်းကိုကြိုက်တယ်! ဒါကရရှိသွားတဲ့အဖြစ်အစစ်အမှန်ပါ!</text>
<text sub="clublinks" start="174.88" dur="5.657"> Skids သည် '' ပထမလှိုင်း '' 80s kitsch ဘဝဖြစ်ပြီးသူအားသင်အတည်ပြုရန်သင့်အားမလိုအပ်ပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="181.394" dur="2"> ဒါပေမယ့်ငါလုပ်လိုက်တယ်။ သူကသူကချောမောတယ်လို့သူ့ကိုပြောပြပါ</text>
<text sub="clublinks" start="185.273" dur="0.5"> ပြောပါ</text>
<text sub="clublinks" start="192.184" dur="3.516"> ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု - လူကဲ့သို့ပင် - တွန်းလှန်!</text>
<text sub="clublinks" start="195.7" dur="4.795"> ရုံကြော့နှင့်ရှုပ်ထွေးခေါက် -Down crumplestiltskids မျိုးကိစ္စ</text>
<text sub="clublinks" start="200.495" dur="4.294"> ငါခေါင်းကိုခတ်ပါးပျဉ်းပါးပျဉ်းမခေါ်လိုတဲ့ထူးခြားတဲ့လက်မှတ်ကိုင်တွယ်နှင့်အတူ!</text>
<text sub="clublinks" start="204.789" dur="4.557"> လိုပဲ, ဘောနက်ပွင့်လင်းရုတ်တရက်နှင့် robo ခေါင်းကိုပတ်ပတ်လည်လှည့်နှင့်ခေါက်</text>
<text sub="clublinks" start="209.346" dur="3.294"> ဒီတော့သူကများစွာသောသူတို့လုပ်ပေးကြောင်းအရုပ်ဆိုးလည်ပင်းပျက်ပြယ်ရှိသည်မဟုတ်ဘာကြောင့်။</text>
<text sub="clublinks" start="212.64" dur="2.24"> ၎င်းသည်အပြင်းအထန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="214.88" dur="4.32"> ဒီ Honda City Turbo alt mode ဟာသိပ်ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ!</text>
<text sub="clublinks" start="219.2" dur="6.08"> ငါသိတယ်၊ မင်းသိတယ်ငါကအပြာရောင်အနိမ့်ဆုံးမော်တော်ကားစီးသူတစ်ယောက်ပါ။ Skids ကတော့အပြာရောင်အပြောအဆိုပါပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="225.28" dur="3.07"> ငါ့ကိုငါအရည်ပျော်ရုံတင်မကဘဲငါ့ရဲ့အားနည်းချက်ပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="228.35" dur="5.747"> ဟုတ်ပါတယ်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စပျစ်သီးအရုပ်ကစားနည်းကိုအကဲဖြတ်တဲ့နေရာကရော်ဘာတာယာတွေ၊</text>
<text sub="clublinks" start="234.097" dur="2.383"> နှင့်သေနည်းနည်းစုဆောင်းသူများတပ်မက်သောသွန်းလေ၏</text>
<text sub="clublinks" start="236.48" dur="6.88"> အလုပ်လုပ်သောတံခါးများနှင့်ဘွတ်ဖိနပ်များသည်၎င်းကိုခေတ်ပေါ် Autobot ကားများထက်နည်းပညာပိုင်းအရပိုမိုပြည့်စုံကောင်းမွန်စေသည်</text>
<text sub="clublinks" start="243.36" dur="2.862"> ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့အော်ဟစ်နေတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="246.222" dur="5.138"> တစ်နေ့လုံးဒီအရာကိုသိမ်းပစ်ချင်တယ်။ ငါကခေါင်းတစ်လုံးတည်းကိုဟမ်းစတားလိုဆုပ်ပြီးစပျစ်သီးပျဉ်နဲ့ကျွေးတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="251.36" dur="5.44"> ငါမှော် ဤလောကသည်ဤအရာကိုမနှစ်သက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာဒီ ၅၀ လုံးမရှိဘူးလား။</text>
<text sub="clublinks" start="256.8" dur="7.84"> ငါမသိဘူး။ ၎င်းသည် sexy အားကစားကားသို့မဟုတ် badass စစ်ပွဲမိုဘိုင်းနှင့်မတူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီတစ်ခုကိုပျင်းစရာနောက်ခံကိုပေးလိုက်တာပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="264.64" dur="5.08"> 'မင်းအလုပ်လုပ်နေတုန်း' ကြောက်မက်ဖွယ် Hatchback ဖြစ်ချင်တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဂြိုလ်သားစူပါကားများအဖွဲ့နှင့်အတူလား။</text>
<text sub="clublinks" start="269.72" dur="5.164"> ဤကဲ့သို့သောအရာသည်သင့်အား megastar တစ်ခုဖြစ်စေသည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည် Skids ကိုလက်တွေ့တွင်ပိုမိုခိုင်မာစေသည်</text>
<text sub="clublinks" start="274.884" dur="3.16"> နောက်ပြီးစက်ရုပ်ကနေငါလိုချင်တာပိုရမယ်</text>
<text sub="clublinks" start="278.044" dur="4.516"> ဤအရာလေးခုသည်ကျွန်ုပ်၏လမ်းပေါ်တွင်ယခုပင်ရောက်နေနိုင်ပြီးမမြင်ရသောမျက်ခုံးကိုပင်ငါမပေါက်စေနိုင်ပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="282.56" dur="8.186"> ဒီသပ်ရပ်နေတဲ့လမ်းဘေးပြေးလမ်းဟာ Lamborghinis အာကာသယာဉ်တစ်စီးနဲ့ပြိုင်ကားမောင်းပြိုင်ကားတစ်စီးလိုမျိုးလှပတဲ့ကလေးတွေထက်နည်းနည်းလေးပိုပြီးဆက်စပ်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="290.746" dur="3.494"> အသရေထင်ရှားသောအချင်းမိန်းမတို့၊ သင်ရောနှော။ နေလော့။ Drive ကိုမမြင်ရသလော။</text>
<text sub="clublinks" start="296.95" dur="4.256"> Ooh, ထိုကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသော Tiny Car Mode ကို Doot-de-Doo ရဲ့ ...</text>
<text sub="clublinks" start="301.6" dur="1.92"> ကုန်ပစ္စည်းများ!</text>
<text sub="clublinks" start="303.52" dur="7.264"> ဒါဆိုငါဆိုလိုတာကမင်းသိလား Skids သည်ထူးခြားထူးခြားသည့်ဒီဇိုင်းနှင့်စိတ်ရောကိုယ်ပါကြည်လင်သည့် Autobot နှလုံးပါသောတကယ့် singular starlet ဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="310.784" dur="4.736"> သူသည်ဒိုင်ယာလိုနီအားမူလတင်သွင်းခဲ့သောကားယောက်ျားလေးများထဲမှအများဆုံးဖြစ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="316.92" dur="6.352"> ဆိုလိုတာကသူဟာ Transformers မှာသိပ်အသုံးမ ၀ င်တဲ့အတွက်ဒီဟာကို Diaclone ကစားစရာလို့စဉ်းစားရတာပိုပြီးသဘာဝကျပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="323.272" dur="4.855"> ငါကအခြေခံတွေအများကြီး၊ Toy Galaxy အရမ်းများလွန်းတယ်၊ ဒါမျိုးရှိရင် -</text>
<text sub="clublinks" start="328.127" dur="7.412"> ဒါပေမယ့်ငါကဒီကစားစရာကို Takara တီဗီကြော်ငြာအချို့မှာရှိတဲ့ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းတဲ့အပြာ - ကောင်းကင်ပြာမြို့တစ်မြို့ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="335.539" dur="3.725"> ထက် ... Decepticons မှာ shootin 'လေဆာရောင်ခြည်? သူမလုပ်ပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="339.264" dur="7.026"> ဒါပေမဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုစိတ်ထဲထားပြီးတောင်မှ၊ ဒီဟာငါ့အတွက်၊ Skids လိုတကယ်ပဲခံစားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးတရားဝင် Skids ကစားစရာပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="346.29" dur="6.044"> လွမ်းဆွတ်မှုကိုစွဲလမ်းနေသောကမ္ဘာတွင်ပင် Skids သည်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောပြန်လည်ပတ်မှုများစွာကိုအမှန်တကယ်မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="352.334" dur="6.38"> ဆိုလိုတာက Skids လေးတွေနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အားလုံးကထူးဆန်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုတွေ၊</text>
<text sub="clublinks" start="359.202" dur="6.878"> ဥပမာ… Robots In Disguise Skid-Z ၏…အားလုံးကောင်းပါပြီ၊ ၎င်းသည်ယောက်ျားနှင့်မတူသည်မှာသေချာသည်၊ သို့သော်သူ၌နာမည်ရှိသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="366.08" dur="2"> Skid-Zuh ကဘာလဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="370.88" dur="1.6"> အဲဒီ Gobot-မြည်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ</text>
<text sub="clublinks" start="372.48" dur="1.508"> , အနားယူ -Q အပေါ်လာကြ!</text>
<text sub="clublinks" start="373.988" dur="4.637"> သို့သော်ကြည့်ရှုပါ၊ ဤနေရာတွင် RID Skid-Z သည်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်မှာသေချာသည်</text>
<text sub="clublinks" start="378.625" dur="6.996"> သူသည် Formula 1 ယာဉ်မောင်း၏တစ္ဆေကိုမတော်တဆစစ်ဆေးမိသောကြောင့် turbo-revvin 'compulsive racing စွဲသောငယ်ရွယ်ပန့်ခ်' အဖြစ်</text>
<text sub="clublinks" start="385.621" dur="1.579"> ဒီတစ်ခါလည်း Skid-Z ကိုသရဲခြောက်တယ်လို့!</text>
<text sub="clublinks" start="387.885" dur="0.5"> တောက်ပ။</text>
<text sub="clublinks" start="388.385" dur="3.935"> ဒီတော့ဒီမှာ Zedhead ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှိမ့်ချတဲ့ Hondabot နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတာထင်ရှားပါတယ် -</text>
<text sub="clublinks" start="392.32" dur="4.379"> သူကသူဟာ Machine Wars Mirage ပုံကိုအခြေခံပြီး Mirage-a နဲ့တူတူပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="396.699" dur="2.821"> အရာ၌အလှည့်အတွက် G2 ကနေဖျက်သိမ်းဒီဇိုင်းအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="399.52" dur="7.64"> အဲ့ဒီတုန်းက RID, Machine Wars, Robot Masters, Beast Wars II တွေအများကြီးရှိတယ်။ သူတို့တွေအားလုံးဟာ G2 overspill နဲ့အတူတူပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="407.16" dur="3.011"> သို့သော်ထိုသူအချို့အစိုင်အခဲကိန်းဂဏန်းများလူဖြစ်! သူတို့ကအရေးယူမှုအနည်းငယ်ထိုက်တန်ပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="410.171" dur="5.033"> သူတို့ဟာရယ်စရာကောင်းတယ်၊ သူတို့မှာအများကြီးကမ်းလှမ်းလို့ရတယ်၊ ၅ နှစ် ၆ နှစ်လောက်တကယ်ချိန်းတွေ့တာမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူး။</text>
<text sub="clublinks" start="416.068" dur="0.732"> စိတ်ဓါတ်များ</text>
<text sub="clublinks" start="416.8" dur="7.293"> မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စက်ရုပ်ပုံစံသည်အလွန်အမင်းမလှုပ်မရှားနိုင်လောက်အောင်ကြီးလွန်း။ ပြိုင်ကားစီးသောရင်ဘတ်နှင့်အဆင်မပြေသောခြေလက်အင်္ဂါများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="424.093" dur="7.085"> ဒါပေမယ့်သူကအခုထိအားလုံးကောင်းနေတုန်းပဲ။ ဒီရဲရင့်တဲ့အရောင်ရင့်ရောစပ်ပြီးရောစပ်နေတဲ့သတ္တုစိမ်းပြာလေးကိုသူကြည့်လိုက်တယ်။ \_ t</text>
<text sub="clublinks" start="431.96" dur="6.44"> တချိန်ကအဖြူရောင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးခြင်းသို့မဟုတ်မဖြစ်ခြင်းသည်ကောင်းကင်အလင်းရောင်အားပြင်းစွာစီးဆင်းခြင်းနှင့်အေးမြသောကြားနေအဝါရောင်ဖြစ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="438.4" dur="6.728"> Gimmick ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်း G2 ရဲ့ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့သူဟာဒီ ace flipchange automorph လီဗာပတ်ပတ်လည်မှာသဘာဝကျပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="445.128" dur="3.938"> နှင့်ဤ flamboyant F1 mode ကိုများအတွက်, သူကပြောတယ်အချို့အသွင်ပါ!</text>
<text sub="clublinks" start="449.066" dur="4.23"> ၎င်း၏ချောမွေ့သော cruisin 'groove နှင့် ballsy ပြိုင်ကားခုတ်နှင့်အတူထွက်စစ်ဆေးပါ!</text>
<text sub="clublinks" start="453.296" dur="7.026"> ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်ပဲဖြစ်ရင်တော့မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုတော့ရှိပါသေးတယ်။ kinda cream ဆိုဒါအရောင်များနှင့် Coca-Cola ဖဲကြိုးနှင့်အတူ kinda 50s ကိုခံစားရသည်။ \_ t</text>
<text sub="clublinks" start="460.54" dur="1.019"> Coke float လိုပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="461.559" dur="4.23"> နှစ်ဆကျယ်သောတောင်ပံပုံစံများနှင့်အတူအချို့သောဂန္ထဝင် Chevy fender မီးသီးများ flashin '!</text>
<text sub="clublinks" start="465.789" dur="1.891"> ဒီဟာသည် gettin ကဲ့သို့ယနေ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်သည်!</text>
<text sub="clublinks" start="467.68" dur="4.766"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်တခါဒီလူတစ်ယောက်ဟာ Armada Mini-con ပေါ်လာပြီးနောက်မှာတော့ Skid-Z နာမည်ထွက်လာလိမ့်မယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="472.446" dur="1.554"> ထို့အပြင်တစ် ဦး shitty တ ဦး တည်း!</text>
<text sub="clublinks" start="474" dur="6.669"> သူတို့ဟာအမှန်တကယ် Armada ကစားစရာပစ္စည်းတွေအတွက်အကြံဥာဏ်တွေကုန်သွားတဲ့အခါမှာပဲသူတို့ဟာ Beast Wars Transmetal recolours ကိုအရောင်တောက်ဖို့လိုလာတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="480.669" dur="4.771"> နောက်ပိုင်းလှိုင်းများကိုစုဆောင်းရန်နှင့် Skid-Z သည်သူတို့ Mini-con ပေါ်တွင်ရိုက်သည့်နာမည်သာဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="485.44" dur="3.427"> - သူတို့ထဲကတစ်ခုနှင့်အတူပစ်ချကြောင်း Mini- cons နှစ်ခုထဲကတစ်ခု!</text>
<text sub="clublinks" start="488.867" dur="3.133"> slummin '' အကြောင်းပြောဆို! Skid-Z-List လိုပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="492" dur="8.48"> ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲဒီ့ကိုကျော်ပြီးသွားမယ့်အစား Skids ရဲ့ Alternators / Binaltech ရှိသူ့ရဲ့ blocky blue bod ဆီကိုပထမဆုံးအောင်မြင်တဲ့တစ်ပိုင်းတစ်စပြန်လာခြင်းကိုရှေ့ဆက်သွားနိုင်ကြပါမယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="500.48" dur="2.416"> - မျဉ်းဖြောင့်သောကြောင့်နှစ်ဆတိုးဟု -</text>
<text sub="clublinks" start="502.896" dur="5.264"> ၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းကစပြီး G1 ပြန်လည်ရှင်သန်လာတဲ့အရာတွေပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="508.16" dur="7.68"> ဤသည်မှာ ၁၉၈၄ မှာမူလပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Skids သည်လိဂ်ကြီးများတွင်သူ၏နေရာကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သင့်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="515.84" dur="3.506"> ငါပြောတာကိုငါမုန်းတီးသဖြင့်သူသည်ဟာသတစ်ခုဟုထင်ရပါသလား။</text>
<text sub="clublinks" start="519.346" dur="3.16"> '' ဒီသွေးထွက်သံယိုအရာကိုကြည့်! အဲဒါ dorkus ပဲ!</text>
<text sub="clublinks" start="522.506" dur="5.494"> ဒါဟာထူးဆန်းတဲ့ sloping ဘီယာဝမ်းခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားနှင့်အတူဒါ droopy နှင့် daft ချွတ်လာပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="528" dur="4"> မိမိအလိုက်တယ် weedy လက်နက်များနှင့်စိတ်ဆင်းရဲနည်းနည်းပစ္စတို dwarfing ။</text>
<text sub="clublinks" start="532.44" dur="4.52"> ဒါပေမယ့်နေဆဲက kinda တောက်ပပါ! သင်လိုချင်တာကိုပြောပါ၊</text>
<text sub="clublinks" start="536.96" dur="6.08"> သူ့မှာအမြင်အာရုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့အပြုသဘောဆောင်နေတဲ့ Binaltech ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကိုသူသေချာပေါက်တွေ့နိုင်တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="543.04" dur="3.992"> heftily ချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာ handfeel နှင့်ခမ်းနားထည်ဝါစွာ labyrinthine အင်ဂျင်နီယာ</text>
<text sub="clublinks" start="547.032" dur="6.728"> သူတို့အားတရားဝင် headlgihts နှင့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော bumper, လေးလံသောအနက်ရောင်ပခုံးကြိုးနှင့်အမြဲ - အပေါ်တက်ကြွသောစတီယာရင်!</text>
<text sub="clublinks" start="553.76" dur="3.501"> ပြီးတော့ခြေထောက်တွေက shit လိုပါးစပ်ဖျားကျတယ်၊</text>
<text sub="clublinks" start="557.261" dur="5.939"> မင်းတို့မှာဒီအဓိက shin bumpers၊ ငွေကြွယ်ပေါင်တွေ၊</text>
<text sub="clublinks" start="563.2" dur="4"> နှင့်ဤ dumpy trapezium ဖိနပ်ဒါ disarmingly အရည်အချင်းမရှိဘူး!</text>
<text sub="clublinks" start="567.2" dur="2"> ဤအရာကိုတင်ထားပါ - သင်ဤအရာကိုမည်သို့မေ့လျော့မည်နည်း။</text>
<text sub="clublinks" start="569.2" dur="8.24"> ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းသော Autobot စွမ်းအင်နှင့်မတူနိုင်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးနေသောသဘာ ၀ ကျသော chungus ဖြစ်ပြီးလျစ်လျူရှုခံရမည်မဟုတ်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="589.6" dur="3.84"> ဒါကလူသားပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="593.44" dur="2.981"> လိုပဲပင် Binal ကောင်လေးတစ်ယောက်အတွက်၊</text>
<text sub="clublinks" start="596.421" dur="6.459"> သူ၏လုံးလုံးလျားလျားရှိသောဒေသတစ်ခုလုံးသည်တုတ်ချောင်းဖြင့်ခေါင်းတစ်ချက်ဖြင့်အခြားတုတ်တစ်ချောင်းကိုဆန့်ထုတ်လိုက်သည်။ \_ t</text>
<text sub="clublinks" start="602.88" dur="5.539"> စာသားအရ everythig လှန်ခြင်းနှင့်လှည့်ခြင်းနှင့်ထို့နောက်သူ၏လက်ရုံးသည်သူ၏လည်ပင်း၏နောက်ကျောသို့အောင်းနေနိုင်ပါတယ်!?</text>
<text sub="clublinks" start="608.419" dur="6.847"> ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သင်ဟာ Transformer ရဲ့စိတ်အားထက်သန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သုတေသနအတွက်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သင့်တယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="615.266" dur="5.054"> ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်၊ Binaltech က Skids အဟောင်းတွေကို Toyota ကလေးလိုမွမ်းမံဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="620.32" dur="6.312"> Binaltech သည်၎င်း၏ကားမော်ဒယ်များပေါ်တွင် ရှင်သန်၍ သေဆုံးသည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="626.632" dur="3.219"> သူတို့ကသူတို့က '' Transformer သို့လှည့်ခဲ့တာလဲ ပြိုသည်!</text>
<text sub="clublinks" start="629.851" dur="6.08"> ဒါကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့၊ ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့တံခါးလေးပေါက်၊</text>
<text sub="clublinks" start="635.931" dur="3.235"> တကယ်တော့တော်တော်အေးတဲ့နေရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အတွင်းပိုင်းတစ်ခု။</text>
<text sub="clublinks" start="639.166" dur="6.274"> ငါဖော်ပြသင့်သည် - သူ၏ရှေ့ထိုင်ခုံတစ်ကြိမ်ထွက်ပေါ်လာသည်နှင့်ငါပဲငါ့အဘို့ဘဝကသူတို့ကိုပြန်အဲဒီမှာပြန်မရနိုင်ပါ, ဒါကြောင့်သူတို့ကတစ် ဦး ဆက်စပ်ပစ္စည်းယခု။</text>
<text sub="clublinks" start="645.44" dur="8.16"> ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီတာကာဟာဒီမြက်မြက်မြက်မြောင်းထဲပစ်ချခံလိုက်ရတဲ့အဲဒီစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့ Smash-Mouth-ass flamp tampos မပါဘဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="653.6" dur="1.732"> အဲဒီမှာ Cheeky သံချေး patch ကို။ အပိုဆု</text>
<text sub="clublinks" start="655.332" dur="7.868"> ငါသည်လည်းဤအကြောင်းတစ်ခုခုတစ်ခုခုဟာ Alternative သွန်းထဲကနေသိသိသာသာပျက်ကွက်ခဲ့ Ironhide ၏, ကျိန်းသေအနံ့ကြောင်းပြောရန်မလွှတ်</text>
<text sub="clublinks" start="663.2" dur="4.8"> နှင့်၎င်း၏ roundy ridgey သံခမောက်လုံးနှင့်အတူဤ chunky ရထားကိုသူ့အဘို့စုံလင်သောမထိုက်မတန်ကြလိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="668" dur="5.479"> ဒါပေမယ့်ငါထင်တာတော့တိုယိုတာကိုယ်စားလှယ်တွေကအပြာရောင်ကိုပြောတာပဲ။ ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာသူ့ကို Skids အတွက်ခွဲထုတ်လိုက်တာလား။</text>
<text sub="clublinks" start="673.479" dur="4.379"> ငါမသိရပါဘူး, တကယ်တော့အဘို့, ဒါပေမယ့် Skids ကိုင်တွယ်ပုံကိုအလွန်ပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်!</text>
<text sub="clublinks" start="677.858" dur="5.342"> ဆိုလိုတာကတစ်ပေါင်ပေါင်။ ဒါကအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံး Skids ကစားစရာဖြစ်လိမ့်မယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="683.2" dur="5.44"> ပြင်ပတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရန်နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊</text>
<text sub="clublinks" start="688.64" dur="1.762"> သငျသညျပွုရမညျ Fatshame - ဒီအထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="690.402" dur="4.409"> ဒါကြောင့် Binaltech Skidneybean ဟာတော်တော်လေးကိုကောင်းကောင်းကိုင်မိသလိုခံစားရတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="694.811" dur="8.096"> အဲဒီခေတ်တစ်ခုလုံးကလူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီလိုပဲ Transformers တွေကိုမူရင်းလက်တွေ့မော်တော်ကားစိတ်ဝိညာဉ်ဆီပြန်ယူလာဖို့အရမ်းကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးနေပုံရတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="702.907" dur="3.368"> ၎င်းကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည် friggin 'ဟုဆိုလိုသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="707.364" dur="1.276"> ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="709.16" dur="6.04"> အခုတော့ငါရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားချက်တွေရောထွေးနေသလောက်ဒီဇိုင်းအတွေးအခေါ်ကိုအမြဲတမ်းခုခံကာကွယ်သွားမှာပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="715.2" dur="4.8"> '' ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့အရသာနဲ့လုံးဝမတူဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုအမြဲတမ်းရှာနိုင်ခဲ့တယ်၊</text>
<text sub="clublinks" start="720.038" dur="3.606"> လူတွေအများကြီးကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါ၊ \_ t</text>
<text sub="clublinks" start="723.648" dur="4.676"> ၎င်းသည်အလွန်ခိုင်လုံသောတရား ၀ င်မှုနှင့်အခြားသောလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များသို့ငွေရေးကြေးရေးအရအထောက်အကူပြုသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="728.324" dur="5.116"> သင် Titan Class Scorponok ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်၊ Bumblebees တွေအများကြီးရောင်းပြီးသွားမှာလား။ ငါတို့သိတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="733.44" dur="8.335"> ငါလိုပဲ #NotMyTransformers ၏အတွေးအခေါ်ကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာသကဲ့သို့ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏ Skids များမဟုတ်ပါ။ မင်းရဲ့ Skids တွေကိုမကြည့်ချင်ဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="741.775" dur="4.465"> သူကဒီ Skids နှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှရတယ်လိုမဟုတ်ဘူး! ငါတို့တွေ့ခဲ့ရသလိုပဲ၊ ကျနော်တို့မျှဝေနိုင်ပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="746.24" dur="3.933"> ငါဟာ "ငါ့ရဲ့ကလေးဘ ၀ ပျက်စီးသွားတယ်" ကောင်လေးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာပဲ, ဒီကောင်လေးယူတာပဲ!</text>
<text sub="clublinks" start="750.173" dur="5.347"> “ မင်းအကြောင်းငါမသိဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါအတွက်တော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတွေအတွက်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲလိုလို "hm၊ ဒါကသူနဲ့မတူဘူး!"</text>
<text sub="clublinks" start="755.52" dur="1.197"> "Ratchet အစိမ်းမဟုတ်ပါဘူး!"</text>
<text sub="clublinks" start="756.717" dur="4.439"> ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုဟာလက်ခံဖို့မခက်ဘူး။ Soundwave လိုပဲ Soundwave နဲ့မတူဘူး။</text>
<text sub="clublinks" start="761.156" dur="3.963"> ဒါပေမယ့်သူကအဆင်မပြေတဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေလုပ်နေတယ်၊ ​​သူကသူ့မှာစပီကာတွေရှိတယ်၊</text>
<text sub="clublinks" start="765.119" dur="4.641"> နာမတော်ကိုမျှဝေသူများနှင့်ပင်၎င်းကောင်လေးနှင့်ခွဲခြားရန်မှာမလွယ်ကူပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="769.76" dur="3.2"> လိုပဲ၊ အဲဒါဟာငါသိတဲ့ Hot Rod မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အဆင်ပြေတယ်! မင်းဘာရလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်</text>
<text sub="clublinks" start="772.96" dur="2"> ဒါပေမယ့် Skids နှင့်အတူကပိုတူရဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="775.2" dur="0.971">f** မင်းအတွက်</text>
<text sub="clublinks" start="776.171" dur="5.331"> သူကစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့ dumbass ရုပ်ရှင်မှာတမင်တကာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ဇာတ်ကောင်ပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="781.502" dur="7.65"> ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြောက်မက်ဘွယ်သောဒီဇိုင်းနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြား overtones နှင့်သူတို့ဒါကြောင့်သိသာသူ့ကို shids "အမည်ရှိသောကြောင့် shitting တူသောအသံကြောင့်</text>
<text sub="clublinks" start="789.152" dur="4.448"> ငါတို့ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ lowbrow level ပဲ။ browest ၏နိမ့်ဆုံး။</text>
<text sub="clublinks" start="793.6" dur="2"> ဒါပေမဲ့သူတို့ကစားတဲ့အတိုင်းကစားစရာမကောင်းဘူး။</text>
<text sub="clublinks" start="795.6" dur="5.955"> ယေဘုယျအားဖြင့်ပြိုလဲနေသောကစားစရာများ၏လက်စားချေခြင်းသည်အလွန်ကြီးသည်။ လိုသလိုပြုလုပ်ထားတယ်၊ အသေးစိတ်လုပ်ထားတယ်၊ ကြွယ်ဝတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="801.555" dur="4.525"> ၎င်းသည်အမြင်အာရုံအားဖြင့်အနည်းငယ်အလုပ်ရှုပ်ကာအလွန် kibblesome ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည်ထိုအရာနှင့်တူသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="806.08" dur="4.944"> ပီသသောအရာအားလုံးကောင်းပါတယ်, သူကရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်အသုံးမကျပေမယ့်အတားအဆီး gimmicks အချို့ရှိပါတယ် ...</text>
<text sub="clublinks" start="811.568" dur="2"> (ရယ်သံများ) လာကြ!</text>
<text sub="clublinks" start="818.24" dur="5.003"> ... နှင့် filmformers များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချသကဲ့သို့, ကားကို mode ကိုရဲ့အမှန်တကယ်တော်တော်လေး snazzy ။ ဒါဟာကျော့ကွင်းရှိပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="823.243" dur="5.479"> ဒါပေမယ့်ဒီကစားစရာနဲ့ပြtheနာကဇာတ်ကောင်ရဲ့ကစားစရာတစ်ခုပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="828.722" dur="3.678"> ငါသူ့ကိုမုန်းတယ် သူ၏မျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ ဒီကောင်လေးကိုဝက်အူ</text>
<text sub="clublinks" start="832.4" dur="7.44"> ငါဒီဟာရိုင်းစိုင်းသောအယူအဆတစ်ခုလို့မထင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Skids and Mudflap ဟာ Transformers ရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="839.84" dur="4.885"> တကယ့်ကန်ကန်သူကဒီ Skids တွေဟာငါကြိုက်တဲ့ Skids တွေထက်အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="844.725" dur="6.639"> ဖန်သားပြင်ပိုကြာလေလေ၊ ကစားစရာများများလေလေ၊ ဒီ dipshit snidsgoblin သည် Skids ၏အဓိကဗားရှင်းဖြစ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="851.364" dur="3.356"> သူကအဆိုးဆုံး Skids ပဲ! သူက Skids ရဲ့လူကြမ်းကြီးလိုပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="854.72" dur="2.88"> Friggin 'Jolt သည် Skids များထက် Skids များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="857.6" dur="8.185"> သူသည်ပြdistနာတိုင်း၏အကြွင်းမဲ့အနှစ်သာရသာဖြစ်သည်၊ ရုပ်ရှင်များသည်ပိုမိုများပြားလာပြီးတစ်နည်းနည်းဖြင့်အနိမ့်ဆုံးကျဆင်းသွားသည်</text>
<text sub="clublinks" start="865.785" dur="5.095"> မင်းရဲ့ ဦး နှောက်တွင်းထဲကိုတိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းလိုက်ပြီးငါတို့အားလုံးဟာအတွေ့အကြုံအတွက်တော့ပိုဆိုးသွားတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="870.88" dur="1.6"> ဟမ် ပုံနေဆဲအနာ။</text>
<text sub="clublinks" start="872.48" dur="5.76"> ဒီ Legion အတန်းအစားကိုမွန်းတည့်မှ Moon of Dark ၏သူမကြာခဏမြင်တွေ့ရသော cybergoth deco ဖြင့်ခဏမျှပစ်သင့်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="878.24" dur="4.8"> ဝန်ခံရမည်အလွန် Skids ပြောင်းရွှေ့သောအရာကို၌သူသည်ရုပ်ရှင်ထဲကနေကျဆင်းသွားခဲ့သည်!</text>
<text sub="clublinks" start="883.04" dur="1.2"> Ahh, သင်ကကြည့်ဖို့မုန်း၏။</text>
<text sub="clublinks" start="884.844" dur="4.617"> ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြာခင်မှာပဲသူကသူ၏အပြာရောင်အမြစ်များကိုပြန်ရောက်လာသောအခါအမှုအရာမကြာမီ Skids များအတွက်နည်းနည်းတက်ခူး</text>
<text sub="clublinks" start="890.102" dur="2.818"> ၂၀၁၃ မျိုးဆက်များအတွက်အခန်း</text>
<text sub="clublinks" start="892.92" dur="2.486"> အခုသင်ငါ့ကိုသိတယ် မျိုးဆက်တွေကငါ့ရဲ့ယိုပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="895.4" dur="1.4"> Movieverse ကငါ့ marmalade ပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="896.8" dur="1.108"> Beast Wars ဟာငါ့အတွက်ပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="899.18" dur="0.82"> bovril ။</text>
<text sub="clublinks" start="900" dur="4.48"> ဒီတော့ဒါကငါတို့အချိန်ကပြန်သုံးသပ်တဲ့တစ်ခုပါ။ ဒါကိုမကြည့်နဲ့ အသက်ကြီးလာပြီ။</text>
<text sub="clublinks" start="904.48" dur="4.16"> ဒါပေမယ့်အဲဒီအချိန်တုန်းက Generation တွေလှုပ်ရှားနေတဲ့လမ်းကိုငါတကယ်ပျော်ခဲ့တယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="909.621" dur="6.219"> သူတို့တွေဟာ IDW ပုံစံမျိုးကိုကြိုက်ခဲ့ကြတာပါ၊ Jhiaxus နဲ့ Chromia တို့လိုမြေအောက်ပန်ကာပရိသတ်တွေဟာ</text>
<text sub="clublinks" start="915.84" dur="4.6"> သွားလာရင်း Armada နှင့် Beast Wars ၏နည်းနည်းကြောင့် rad ပဲ! ဘယ်မှာသွားနေလဲလို့မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။</text>
<text sub="clublinks" start="920.44" dur="2.44"> မျှမျှတတပြောရရင်နှစ်လလောက်တော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်၊</text>
<text sub="clublinks" start="922.88" dur="5.925"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Prime War တွေ ၀ င်လာပြီးလူအုပ်တွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ G1 ထဲကိုပြန်အရောက်ပို့ပေးတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="928.805" dur="4.647"> တိုင်ကြားလို့မရဘူး ငါချုပ်စစ်ပွဲများကိုချစ်၏။ ငါလူအစုအဝေး - နှစ်သက် G1 ကိုချစ်။ ငါလူအုပ်ကြီးထဲမှာပါ</text>
<text sub="clublinks" start="933.452" dur="5.271"> သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောရုတ်တရက်ဗေဒပြောင်းလဲမှု kinda Skids နှင့် Trailcutter နှင့်ထွက်ခွာခဲ့တယျ</text>
<text sub="clublinks" start="939.037" dur="5.301"> ... အအေးမိနေတဲ့ Mini-con အရာက 'အခုသူတို့လူအုပ်ထဲကနေထွက်လာကြပေမယ့်မှားယွင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်!</text>
<text sub="clublinks" start="944.338" dur="3.982"> ဒီဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ထွက်ခွာသွားတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပanိပက္ခဖြစ်တာပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="948.32" dur="2"> ပြီးတော့ဒါကမကောင်းဘူး။</text>
<text sub="clublinks" start="950.32" dur="5.895"> လိုပဲ, ငါနေဆဲနည်းနည်းစူပါမီနီ alt-mode ကိုချစ်ကြတယ်, နှင့် Head Hood ကို Flip Flap ကိုအရေးယူအနည်းငယ်ကိုကြည့်ဖို့အမြဲကောင်းပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="956.215" dur="1.316"> Skids ယဉ်ကျေးမှုပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="957.531" dur="4.885"> သို့သော်ကဲ့သို့, အရောင်အားလုံးမှားယွင်းနေသည်။ ခြေများသည်မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သည်။ ပခုံးကခွေးတွေပဲ!</text>
<text sub="clublinks" start="962.416" dur="6.762"> မျက်နှာသည်တည့်တည့်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပြီးသေနတ်များသည်အလွန်အမင်းလျော်ကြေးပေးခြင်းမှထွက်ပေါ်လာသည်။ သိပ်ပျော်စရာမကောင်းဘူး!</text>
<text sub="clublinks" start="969.178" dur="4.422"> ပြီးတော့ Skidney Poitier အတွက်ကြီးမားတဲ့ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုလိုခံစားခဲ့ရလို့ဒါဟာအလွန်ရှက်စရာကောင်းတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="973.6" dur="5.925"> နောက်ဆုံးတွင်သူသည်ရုပ်ပြများတွင်ကောင်းမွန်သောပြေးဝင်ကစားခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="979.525" dur="2.555"> Megalearning ၏စူပါပါဝါနှင့်အတူ!</text>
<text sub="clublinks" start="982.08" dur="0.781"> Friggin 'nerd ။</text>
<text sub="clublinks" start="982.861" dur="5.926"> Skids ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်လျက်ရှိသည့်အချိန်ကာလ၌ပင်သူသည်နိမ့်ကျသောနိဂုံးနှင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="988.787" dur="3.13"> အားလုံး 3, 2, 1 မှာဖျက်လိုဖျက်ဆီး</text>
<text sub="clublinks" start="991.917" dur="8.563"> သူသည်မိမိကိုယ်ကိုအလွန်ရှက်ကြောက်လာပြီးသူ၏စိတ်ဝိညာဉ်ပေါက်ကွဲပြီးသူသေဆုံးချိန်အထိတိတ်တဆိတ် slunk, မျက်နှာကိုငုံ့လျက်၊</text>
<text sub="clublinks" start="1000.48" dur="6.52"> ပြီးတော့စကြဝuniverseာရှိသူ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကသူမ၏မှတ်ဥာဏ်အားလုံးကိုသူ့ ဦး နှောက်မှခွဲစိတ်ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1007" dur="4.36"> (ညည်းတွားသံများ) ဒါဆိုငါ့ကိုရအောင်လုပ်ပါ၊</text>
<text sub="clublinks" start="1011.36" dur="6.56"> ဒါဘာလဲ? Megatron အဲဒီမှာရှိပြီးသူကအားကောင်းနေလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တကယ်မလိုအပ်တဲ့ယာယီအသင်းသက်သက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုလား။</text>
<text sub="clublinks" start="1017.92" dur="4.64"> ဒါ့အပြင်သူတို့ကဘယ်သူမှ shit ကိုမပေးခဲ့ဘူးဆိုတာနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="1022.56" dur="3.52"> သူမရဲ့အကောင်းဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်ကအရှုံးမပေးဖို့ထွက်သွားတာပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="1026.08" dur="2.387"> ငါကပိုရှင်းနေတာပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="1028.467" dur="2.573"> လိုပဲ - Skids တစ်ချိုးဖမ်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်လား?</text>
<text sub="clublinks" start="1031.04" dur="7.04"> စကြာဝtheာသည်ဤကောင်လေးအားအလွန်အမင်းမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်းမှသတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်မည်သည့်အောင်မြင်မှုမျိုးကိုမဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပါသလား။</text>
<text sub="clublinks" start="1038.08" dur="3.68"> အခြားလူမျိုးများ၏စိတ်ထဲမှ!? သငျသညျသူ့ကိုမှနောက်ထပ်ဘာလုပ်နိုင်မည်နည်း</text>
<text sub="clublinks" start="1041.76" dur="4.111"> ငါတို့မော်လီကျူးတစ်ခုစီကိုငါတို့တစ်ယောက်ချင်းစီဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာလား။</text>
<text sub="clublinks" start="1045.871" dur="2.922"> ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်မလေးစားမှု!</text>
<text sub="clublinks" start="1050.689" dur="1.167"> ကောင်းပြီ၊ ဒါကဖျက်လိုဖျက်ဆီးတွေရဲ့အဆုံးပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="1051.856" dur="1.704"> ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့အခုဘယ်မှာလဲ နောက်ဆုံးပေါ်ကဘာလဲ</text>
<text sub="clublinks" start="1053.56" dur="3.88"> ကောင်းပြီ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပြည့်နဲ့ငါတကယ်ဒီဗီဒီယိုကိုနည်းနည်းလေးအောင်လုပ်နေတာပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="1057.44" dur="4"> ငါ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုက War For Cybertron trilogy အယူအဆကနေလာမယ့် Skids အသစ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="1061.44" dur="4.141"> ၎င်း၏ဘတ်ဂျက် Masterpiece ဗေဒနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ track record နှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၌ဖြစ်လိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="1065.581" dur="6.899"> Skiddy ကောင်းမြတ်ခြင်း၏နံ့သာမှုနှင့်အတူမည်သည့်အရင်းအမြစ်ကိုမဆိုဖော်ထုတ်ပြသခဲ့သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1072.48" dur="4.438"> ၎င်းသည် ol 'Steak နှင့် Skidney ၏နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="1076.918" dur="5.482"> အရာရာတိုင်းဟာနွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့မှေးမှိန်နေခဲ့တဲ့အချိန်တိုအတွင်းကဖြစ်ပျက်လာတာပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="1082.4" dur="6.381"> သူတို့ဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားခဲ့တာကိုငါရူးလို့မရဘူး၊ ၇ နှစ်ကျော်ပြီ အခြားလူတိုင်းတစ် ဦး လုပ်ပေး - ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်!</text>
<text sub="clublinks" start="1088.8" dur="3.2"> Chromia, friggin '' တငျမွှောကျ, Doubledealer, Springer!</text>
<text sub="clublinks" start="1092" dur="3"> လူတိုင်းက Springer ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသူကနောက်ထပ်တစ်ခုရသေးသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1095" dur="5"> ဒါပေမယ့်မ Skids! ကျွန်တော်တို့ဟာဒီခေတ်မမီတော့တဲ့ပိုးသတ်ဆေးဖြူနဲ့လုပ်နေကြတုန်းပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="1100" dur="8.013"> Skids မှအပဇာတ်ကောင်တိုင်း၏နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော G1 ဗားရှင်းများကိုယခုကျွန်ုပ်တို့မွမ်းမံထားပြီဟုမယုံနိုင်ဘူး။</text>
<text sub="clublinks" start="1108.013" dur="5.267"> Generation Skids သည်ဤအခြေအနေမျိုးတွင်ရောက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးကစားစရာဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1113.28" dur="4.32"> အကြောင်းအရာတစ်ခုဖန်တီးသူအနေနဲ့ငါဟာတစ်နေရာရာကိုအမြင့်ဆုံးရောက်အောင်ဗီဒီယိုတွေကိုကြိုက်တယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="1117.6" dur="3.338"> ငါတို့ယောက်ျားလေးကိုမပြီးသေးတဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုပေးရမယ်။ ငါတို့အဲ့ဒီဟာကွက်ကိုလိုတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="1120.938" dur="7.085"> ထိုအဘို့, ငါကျနော်တို့တရားဝင်အချိန်ဇယားကိုစွန့်ခွာခြင်းနှင့်အစားလိုင်စင်မဲ့ဝါသနာရှင်များ၏တောထဲသို့လမ်းလွဲသွားရမည်ကိုကြောက်တယ်!</text>
<text sub="clublinks" start="1129.88" dur="6.64"> ဟုတ်ကဲ့အမှန်ပါပဲ၊ သင်ဟာ X X Transbots တွေဖြစ်တဲ့ Stalwart Third Party တိရိစ္ဆာန်များမှ Master X Series Savant အတွက်လုပ်ပေးပါ</text>
<text sub="clublinks" start="1136.52" dur="5.72"> ငါတို့အစဉ်အမြဲငါ Masterpie Skids ရလိမ့်မယ်အနီးဆုံးခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေတယ်!</text>
<text sub="clublinks" start="1142.24" dur="7.76"> 'ဒါကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ ဦး ။ XTB Savant သည်သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ဇိမ်ခံကားနှင့်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသောအဆင့်အတန်းကိုကိုယ်စားပြုသောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောလှပသောအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="1150" dur="2.297"> ကြောင်း "အပိုင်းအစ" အဖြစ်ကရည်ညွှန်းဖို့ငါ့ကိုလိုအပ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1152.297" dur="8.81"> လိုပဲချက်ချင်းလက်၌အံ့သြဖွယ်ခံစားရ! ၎င်းသည်အလေးချိန်ရှိပြီးအစိုင်အခဲရှိပြီးချောချောမွေ့မွေ့သောအရည်အသွေးရှိသည့်ပလပ်စတစ်ခံစားမှုနှင့်အရသာရှိသောသတ္တုတို့ဖြင့်ချောမွေ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="1161.107" dur="0.973"> - ဤချန်နယ်နှင့်မတူသည်</text>
<text sub="clublinks" start="1162.08" dur="5.628"> အဆစ်များသည်ခိုင်ခံ့ပြီးတောက်ပ။ တုန့်ပြန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1167.708" dur="7.888"> ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိခြင်း၊ စုဆောင်းထားသောအဆင့်အတန်း၏ပုံသဏ္ofာန်သည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် Friggin ၏ workaday Honda hood နှင့်အတူဖြစ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1175.596" dur="2"> အခုငါ့ဝိညာဉ်အရမ်းပြည့်နေပြီ။</text>
<text sub="clublinks" start="1177.596" dur="5.124"> ထူးဆန်းသည်မှာသူသည်လက်မှတ်ထိုးထားသည့်စတုရန်းမိုင်ကိုမရရှိသော်လည်း၎င်းသည်၎င်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်မမှန်သည့်လည်ပင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်</text>
<text sub="clublinks" start="1182.72" dur="3.844"> ဒါပေမယ့်ဘာပဲ! တောင်းပန်ပါတယ် ငါ့နှလုံးသားထဲကသီချင်းကိုမင်းမကြားနိုင်ဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="1186.564" dur="6.223"> ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဝေဖန်ရမယ်၊ ပြီးတော့ဒါကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရမယ်၊ ငါအရောင်တွေဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရောနှောမှုတစ်ခုလို့ပြောသင့်တယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="1192.787" dur="3.213"> မင်းမှာဂန္တ ၀ င်တောက်ပတဲ့တောက်ပတဲ့မဲနယ်မြေတစ်ခုလိုပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="1196.856" dur="4.885"> ဒီတီဗီရှိုးအမှုန့်အပြာနဲ့အတူငါအလုပ်ဖြစ်တယ်ထင်လား</text>
<text sub="clublinks" start="1201.741" dur="4.171"> အပြင်ကဇာတ်ကောင်တွေအားလုံး Skids ဟာကာတွန်းကိုးကွယ်မှုကုသမှုလိုအပ်မလိုငါမသိဘူး။</text>
<text sub="clublinks" start="1205.912" dur="2.728"> ထိခိုက်မှုမရှိ! ငါကြိုက်နေတုန်းပဲ၊</text>
<text sub="clublinks" start="1208.64" dur="6.88"> ကာတွန်းထဲမှသင်ထည့်သွင်းနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောသယ်ဆောင်ရမည့်အစစ်အမှန်များမှာအနီရောင်အစက်အပြောက်များရှိသည့်ပခုံးလက်ကောက်နှင့်အတူဖျော့ဖျော့လေးများဖြစ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1215.52" dur="4.29"> ရှည်လျားပြီးကျဉ်းမြောင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့အိပ်မက်လိုပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="1219.81" dur="2.238"> နှင့်တူသော ... blanched ဒူးထောက်? ငါမသိဘူး။</text>
<text sub="clublinks" start="1222.048" dur="4.192"> လက်နက်များသည်ဖန်သားပြင်ကိုအလေးထားပြီးနှစ်သိမ့်မှုသိပ်မရှိလှပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="1226.241" dur="5.119"> ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့အမွှာ zap လေဆာညွှန်ပြစက်ဟာသူ့လက်ထဲမှာရှိသင့်ပေမယ့်မဖြစ်နိူင်ဘူးလို့ထင်တယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="1231.36" dur="2.56"> မင်းကသူ့လက်တစ်လုံးလုံးကိုဖြတ်ကြည့်နိုင်တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="1233.92" dur="2.72"> ပြီးတော့ဒီတစ်ခုကအားလုံးအိတ်တွေမရှိတော့ဘူး။</text>
<text sub="clublinks" start="1236.64" dur="5.152"> ငါမသိဘူး။ ဒါဟာသိပ္ပံနည်းကျသိပ္ပံဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်နည်းနည်းနဲ့နည်းပညာပိုင်းအရအတော်လေးအထောက်အကူပြုနိုင်တာပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="1241.792" dur="2.565"> ဒါပေမယ့်သင်က Blitzwing ကိုထုတ်ယူတဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူး။</text>
<text sub="clublinks" start="1244.357" dur="2.363"> ဒါဟာကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါဘူး! ဒါဟာလိုက်တယ်တစ်ခုပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="1246.72" dur="6.56"> လိုပဲ၊ ဒီဟာကအလွန်သေးငယ်သော၊ လိုအပ်နေသော၊ ကံဆိုးသောအမြောက်အများပါသောကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်မည်သည့်အရာကမည်မျှကြီးမားလှသည်ကိုပင်မထိပေ။</text>
<text sub="clublinks" start="1253.28" dur="2.32"> အဲဒါကျွန်တော့်ကိုအရာရာပေးနေတယ်။ သင်သာကြည့်ရပါမည်!</text>
<text sub="clublinks" start="1255.6" dur="9.009"> ၎င်းတွင်ချိုမြိန်။ တောက်ပသောစင်းစင်းတံခါးများနှင့် windscreen ပစ္စတင်ငယ်များရှိသည်။ ၎င်းသည်ကားလေးပုံတစ်ပုံမှလုပ်ထားသောredရာမအနီရောင် brogues နှင့် shin များရှိသည်။ \_ t</text>
<text sub="clublinks" start="1264.609" dur="3.13"> အဲလိုစားဖိုမှူးရဲ့နမ်းတာမျိုးရှိတယ်။ ဒါက sorta je ne sais quoi ။</text>
<text sub="clublinks" start="1267.739" dur="2.684"> ဒါကအင်း ... y'know, uh, အဲဒါကိုရရှိပါသည်, uh ...</text>
<text sub="clublinks" start="1270.423" dur="2.377"> [The Touch "မိတ်ဆက်ခြင်း]</text>
<text sub="clublinks" start="1272.8" dur="0.9"> Nah လွန်းသိသာ။</text>
<text sub="clublinks" start="1290.693" dur="7.055"> ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည်အလွန်အမင်းပြည့်စုံနိုင်သည်၊ သို့သော်အလွန်ထူးကဲသောတတိယပါတီ၏အခိုင်အမာပြောဆိုမှုမှာအလွန်အမင်းရှုပ်ထွေးမှုရှိသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1297.748" dur="6.732"> ခြေထောက်များနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အားလုံးသည်သင့်လျော်စွာမှန်ကန်ပြီးရိုးရှင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့်လက်များသည်ဤရှုပ်ထွေးသောအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်သေချာမသိပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="1304.48" dur="5.2"> အဲဒီမှာအားလုံးသည်သေးငယ်သော tabs များနှင့်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုပြား၏လက်ဖျံပတ်ပတ်လည်လှည့်ပတ်ပြား၏အလွှာ</text>
<text sub="clublinks" start="1309.68" dur="1.902"> ဒါပေမယ့်ကလေး, သင်အဲဒီမှာရသည့်အခါ!?</text>
<text sub="clublinks" start="1311.582" dur="3.992"> ကြည့်ရတာဒီမှာ hyperbolic မလုပ်ချင်ဘူး ကျွန်ုပ်၏ဆောင်ပုဒ်၏တစ်ဝက်မှာ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1315.574" dur="4.26"> ဒါပေမယ့်ဒါကငါ့အိပ်မက်တွေရဲ့ကားပုံစံပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="1319.834" dur="3.686"> ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အမှန်တကယ်လုံးဝတိကျမှန်ကန်သော Honda City Tubro ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်ုပ်မသိပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="1323.529" dur="6.711"> ဒါကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ bumper grille လား၊ ဒါမှမဟုတ်ဘေးဘက်နောက်ကွယ်ကဓာတ်ဆီအဖုံးနဲ့ညာဖက်စတီယာရင်ရှိသလားဆိုတာငါမသိဘူး၊ \_ t</text>
<text sub="clublinks" start="1330.24" dur="3.52"> ဒါပေမယ့်သူက Skids များကဲ့သို့ကြည့်ရှုပါကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပါပဲ!</text>
<text sub="clublinks" start="1333.76" dur="5.36"> ၎င်းသည်နှစ်သက်ဖွယ်ရွှင်လန်းဖွယ်ကောင်းသော၊ ပျော်စရာကောင်းသောမြေကမ္ဘာသို့မော်တာအနည်းငယ်သာရှိသေးသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1339.12" dur="6.014"> ၎င်းသည်အလွန်အကျွံအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းကိုအလွန်အကျွံမသုံးခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ရှုပ်ထွေးသော ၀ မ်းနည်းစရာများကိုမထည့်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1345.134" dur="5.106"> ကြည့်ပါ ဦး ။ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်။ ပြပွဲအပေါ်မေတ္တာနှင့်လက်ရာအများကြီးရှိပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="1350.24" dur="5.76"> သူတို့အားတောက်ပသောမျက်လုံးရှေ့မီးမှသည်မပျက်စီးနိုင်သောရော်ဘာတောင်ပံမှန်များနှင့် ... asspipe အထိ။</text>
<text sub="clublinks" start="1356" dur="5.985"> ဒါကသင့်ကိုတကယ့်ခံစားချက်ရှိတာပဲ၊ သုတ်ဆေးကကျွန်တော့်ကိုမဲနယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာငါ့ကိုရေကူးသွားစေတယ်!</text>
<text sub="clublinks" start="1361.985" dur="6.371"> ကြည့်ရတာ Skids ဟာအအေးဆုံး Autobot ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သူကစျေးကွက်ကို havin 'တံခါးများမှာထောင့်မှန်အောင်ချခဲ့တယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="1368.356" dur="6.164"> နှင့်ဤထွက်စစ်ဆေး, ဒီရယ်စရာပါပဲ။ သူတို့ဟာသူ့ကို Diaclone နေ့ကစပြီးခေါက်သိမ်းထားတဲ့ဆိုင်ကယ်လေးပေးလိုက်တယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="1374.52" dur="5.48"> သူ၌ပင် Transformers ၌ဤမရှိခဲ့ပါ။ ဤသည် Pre-G1 ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါက Pre-1 ပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="1380" dur="2.56"> ဒါကအစဉ်အဆက်ဖြတ်အနက်ရှိုင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="1382.56" dur="4.052"> ဒါဟာအလွန်နက်ရှိုင်းတဲ့ဖြတ်တောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားတစ်ဖက်ကိုဖြတ်သွားသွားပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="1386.612" dur="2.188"> ဤသည်နက်ရှိုင်းသောဖြတ်ထွက်ပေါက်အနာဖြစ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1388.8" dur="3.19"> အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤ box ၏ပရိသတ်မဟုတ်ပါ။ ဟုတ်တယ်၊</text>
<text sub="clublinks" start="1391.99" dur="5.806"> တူတူပဲ၊ ချစ်စရာကောင်းပြီးသေးငယ်တယ်၊ ဗီရိုဘယ်နေရာမှမဖြုန်းတီးဘူး၊</text>
<text sub="clublinks" start="1398.36" dur="2.76"> ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်၊ X-Transbots ကဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ကိုငှားလိုက်တယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="1401.12" dur="2.297"> အလွန်များပြားသောဖောင့်! အရမ်းသေးတယ်။ အရမ်းရုပ်ဆိုးတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="1403.417" dur="3.783"> ဒီကရင် - ကရင်ရဲ့အမှားအယွင်းဆိုတာဘာလဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="1407.2" dur="2.8"> မင်းဘာလို့ဒီလိုလုပ်မှာလဲ။ ဒါဟာပုံကောင်းတစ်ခုပါပဲ သင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် -</text>
<text sub="clublinks" start="1410.12" dur="1.88"> အဲဒါ ... Deathsaurus ရဲ့ခွေးလား</text>
<text sub="clublinks" start="1412" dur="4.64"> ကြည့်ရတာအသေးအဖွဲတွေကိုဖယ်ထားပါ၊ X-Transbots Savant ဟာသာယာလှပတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="1416.64" dur="7.04"> ဤသည်သည်အဆင့်မြင့်လက်ရာတစ်ခုကဲ့သို့တူညီသောအလိုလိုကျလှနျးခွငျးအချက်တစျခုနှငျ့အတူနီးပါး - အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောစုဆောင်းစျေးကွက် Skids ပါ!</text>
<text sub="clublinks" start="1423.68" dur="4.498"> ဒါကအစဉ်အမြဲကြည့်ရှုတော်မူခဲ့ပြီးငါ besotted ငါဖြစ်၏အကောင်းဆုံး Skids ဖြစ်ပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="1428.178" dur="3.398"> သင် XTB နှင့်အတူဆင်း? ဟုတ်တယ်၊ မင်းငါ့ကိုသိတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="1431.869" dur="3.784"> [voiceover] ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ၊</text>
<text sub="clublinks" start="1435.653" dur="5.907"> အချို့သောဥပဒေများကန့်သတ်ထားသည့် copycat ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်တရားဝင်အချိန်ဇယား၌ရေတွက်ခြင်းမရှိကြောင်းအချို့ကသိသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1441.56" dur="4.664"> ဒါဟာအားလုံးအိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အပြင်ဘက်။ အရည်အချင်း။</text>
<text sub="clublinks" start="1446.224" dur="6.758"> ပြီးတော့အစစ်အမှန်ကမ္ဘာရဲ့အေးစက်နေတဲ့၊ ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာသူဟာ Skids ရဲ့နောက်ဆုံးသိမြင်မှုအပေါ်ဇာတ်လမ်းကိုပိတ်ပစ်လိုက်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="1453.294" dur="2"> Q-Transformer ၌တည်၏။</text>
<text sub="clublinks" start="1455.294" dur="1.906"> ဝိုး။ ပိုကြီးတဲ့အဆင့်လျှော့ချပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="1457.2" dur="2.64"> Q-Transformers မှာအမှားအယွင်းမရှိပါဘူး။</text>
<text sub="clublinks" start="1459.84" dur="5.885"> သူတို့ဟာအလွန်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ပျော်စရာပါ။ ငါသေချာပေါက်သူတို့ရဲ့စိတ်ပျက်ဖွယ်ချစ်စရာ super- ကီထိုင်ယူနီဖောင်း tump ပျော်မွေ့</text>
<text sub="clublinks" start="1465.725" dur="2.675"> နှင့်ဤ squishy နည်းနည်းကောင်းကင်ပြာအပြာရောင် Suzuki</text>
<text sub="clublinks" start="1469.084" dur="2"> အလွန်အမင်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="1472.64" dur="7.531"> ဒါပေမယ့်ဒီနည်းကလတ်တလောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာမြင်းကောင်ရေကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကအဲဒါဟာနောက်ဆုံးအမျက်တော်ခံစားချက်မဟုတ်လား။</text>
<text sub="clublinks" start="1480.171" dur="5.628"> Prowl နှင့် Ironhide ကဲ့သို့သူ၏အစ်ကိုများစွာသည်မွမ်းမံမှုများနှင့်လက်ရာမြောက်များစွာရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="1485.799" dur="7.481"> နှင့်လတ်တလောမကြာသေးမီကလွန်ခဲ့သော ၁၈ လအတွင်း EACH၊ အေးမြသောခေတ်သစ်ပင်မကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုဖြစ်သော AND Q-Transformers,</text>
<text sub="clublinks" start="1493.28" dur="6.847"> Skids များကိုယခုခေတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း toyline တိုင်းမှဖယ်ထုတ်ထားသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1500.127" dur="2.684"> Hasbro ရဲ့ချမှတ်ခြင်း၏ဘိုအယူအဆအတွက်မျော။</text>
<text sub="clublinks" start="1505.52" dur="6.518"> နှင့်အရရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်ထူးခြားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသူဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="1512.038" dur="2.042"> ဤကဲ့သို့သော stagnate ခွင့်ပြုခဲ့!</text>
<text sub="clublinks" start="1514.08" dur="7.04"> လာစမ်းပါ! မျက်မှောက်ခေတ် Autobot မိသားစုသည်သေးငယ်သောရေတပ်အပြာရောင်စူပါမင်းနီများနှင့်အတူပိုမိုပြည့်စုံသောချိုမြိန်မှုကိုခံစားရလိမ့်မည်မဟုတ်လော။</text>
<text sub="clublinks" start="1521.12" dur="7.055"> ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငါခံစားရတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Skids တွေကမသင့်တော်ဘူးလို့ပဲ။ သူမလုံလောက်ဘူး သူကဈေးကွက်အလုံအလောက်မရှိဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="1528.175" dur="7.025"> သူဟာ Sideswipe လိုမျိုးမကောင်းဘူး၊ Sunstreaker လိုမျိုးစတိုင်ကျတာမျိုး၊ Wheeljack လိုအထင်ကြီးစရာကောင်းတာမျိုးဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ပါဘူး။</text>
<text sub="clublinks" start="1535.2" dur="5.361"> အခြားအရာများ၊ ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျ ပို၍ အေးသောအက္ခရာများနှင့်လှပသောထင်ရှားကျော်ကြားမှုများစွာသာရှိသောအခါ၊</text>
<text sub="clublinks" start="1540.561" dur="4.17"> ဒိုင်နိုဆောများနှင့်မည်သို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်လိုသည့်စိတ်မရှိသောသီအိုရီသမားကဘယ်လိုလဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="1544.731" dur="7.269"> သူကအခြားကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်တောင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ သူကအခြားကောင်လေးပါ။ အဓိပ္ပါယ်မေ့လျော့ G1 ၏သား။</text>
<text sub="clublinks" start="1552" dur="5.44"> ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခါလည်းဒါဟာ Skids ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ပဲ! သူမကြာခဏမပြရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာသူမလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1557.44" dur="5.43"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလက်တဆုပ်စာပြန့်ကျဲနေတဲ့လက်မခံတဲ့ပုံပန်းသဏ္appeာန်ကသူ့ကိုအချို့သောအရှုံးသမားကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုပေးလိုက်တာပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="1562.87" dur="8.01"> နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Combiner (သို့) ကျောင်းအုပ်ကြီးတစ် ဦး (သို့) ချုပ်ချုပ်တစ်ယောက်အနေနှင့်နှစ်စဉ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းထက် ပိုမို၍ တန်ဖိုးရှိသောအရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1570.88" dur="6.312"> မြင်းစီးသူရဲများနည်းပါးသောအနိမ့်သောနာယကသူတော်စင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပို။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုလေးစားရန်လိုအပ်ပါသည်သူပဲ!</text>
<text sub="clublinks" start="1578.36" dur="1.64"> ငါပြproblemနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်!?</text>
<text sub="clublinks" start="1580" dur="8.037"> ငါပဲလား? ငါကသူ့ကိုဝန်းရံနေတဲ့အလှကိုကြည့်ပြီးစိတ်ဆိုးနေတုန်းပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="1588.037" dur="5.426"> သူလိုချင်သော hyper-specific အရာတစ်ခုတော့မရှိနိုင်လို့လား။ "Uuhh, Hasblow!" အဲ့ဒါငါမဟုတ်ဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="1593.85" dur="0.692"> ဟုတ်လား?</text>
<text sub="clublinks" start="1594.542" dur="4.201"> ကြည့်လိုက်စမ်း၊ မင်းကြိုက်တဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီးသူတို့နေရာရှာဖို့ကြည့်ရတာနို့စို့</text>
<text sub="clublinks" start="1598.743" dur="3.487"> ပြီးတော့သူတို့အတွက်အောင်မြင်မှုနဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုလက်ခံချင်တာကသဘာဝပါပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="1602.23" dur="4.771"> ဒါပေမယ့် Skid တွေအတွက်မဖြစ်ခဲ့တာတွေ၊</text>
<text sub="clublinks" start="1607.001" dur="3.399"> ဒါပေမယ့်ဘဝပဲ။ လူတိုင်းမလုပ်ကြပါဘူး။</text>
<text sub="clublinks" start="1610.4" dur="3.368"> ပြီးတော့ဒီပုံပြင်တွေအားလုံးတစ်လျှောက်လုံးငါ့ကိုပြောပြဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်နိုင်တယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="1613.768" dur="5.122"> ဒီအရာအားလုံးထဲမှာ Skids ရဲ့အခန်းကဏ္weကငါတို့ရှုံးတာပါပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="1619.455" dur="1.792"> မေ့လျော့ခံရဖို့</text>
<text sub="clublinks" start="1622.12" dur="2"> ဒါ့အပြင်ဒါကငါ့အတွက်ပဲ ...</text>
<text sub="clublinks" start="1624.994" dur="1.167"> ... သူ့ကိုလွှတ်ပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="1628.522" dur="0.573"> မဟုတ်ပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="1629.095" dur="5.45"> Hasbro, ငါကသောကြာနေ့မှာငါ့စားပွဲခုံမှာ Transformers Kingdom Deluxe Class Skids ချင်တယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="1634.545" dur="2.476"> Tonton, ငါ့ကိုသင်ချိတ်ဆက်ရန်ရှိသည်၊</text>
<text sub="clublinks" start="1640" dur="3.812"> အိုးကောင်လေး ဒါပျော်စရာပဲ! ငါ့ကို Skidses နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1643.812" dur="6.188"> Rodimus Minor ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင် Opsimathics၊ Jolene၊ Chris နှင့်ဂျိမ်းစ်တို့၏အမည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1650" dur="5.39"> နှင့်သင်တန်း၏ပြပွဲကိုထောက်ပံ့ဘို့အာဒံကို Skarnes မှကြီးမားတဲ့နာယကကြွေးကြော်။ သငျသညျကလေးကအားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှလုပ်!</text>
<text sub="clublinks" start="1655.39" dur="2"> ကောင်းပြီ! လုပ်ဆောင်စရာများစွာ သင် flipside အပေါ်ဖမ်း!</text>
<text sub="clublinks" start="1658.483" dur="4.706"> Thew ၏ Awesome Transformers သုံးသပ်ချက်များကိုပိုမိုရယူရန်သေချာပါသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="1663.665" dur="2.476"> အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအယူခံဝင်ပါ၊</text>